Search Results for “UEFA” – DVB
UEFA Nations League ပြိုင်ပွဲ၌ စပိန်က ဂျာမနီကို ၆ ဂိုးပြတ်နိုင် (ရုပ်သံ)
ဒီနေ့ မနက် ကစားတဲ့ UEFA Nations League ပြိုင်ပွဲမှာ စပိန်အသင်းဟာ ဂျာမနီအသင်းကို ၆ ဂိုးပြတ် အနိုင်ရလိုက်ပါတယ်။ စပိန်အတွက် အဖွင့်ဂိုးကို ပွဲချိန် ၁၇ မိနစ်မှာ ဖာဘီယန်ရုဇ်ရဲ့ ထောင့်ကန်ဘောကနေ မိုရာတာက ခေါင်းတိုက်သွင်းခဲ့တာပါ။ ဒုတိယဂိုးကတော့ ပွဲချိန် ၃၃ မိနစ်မှာ ဂျာမနီဂိုးသမား ပုတ်ထုတ်လို့ ပြန်ထွက်လာတဲ့ ဘောလုံးကို ဖယ်ရန်တောရက်စ်က ကန်သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ ၃၈ မိနစ်မှာ ရိုဒရီ ခေါင်းတိုက်ပြီး တတိယဂိုး သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယပိုင်း ၅၅ မိနစ်မှာ ဖယ်ရန်တောရက်စ်က ဂိုးသမားနဲ့ အနီးကပ်အနေအထားကနေ ကန်သွင်းပြီး စတုတ္ထဂိုး သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ ၇၁ မိနစ်မှာ ဖယ်ရန်တောရက်စ်နဲ့ ၈၉ မိနစ်မှာ အော်ယာဇာဘယ်လ်က အသီးသီး သွင်းယူခဲ့ကြတာပါ။ League A ရဲ့ Group4မှာ စပိန်အသင်းဟာ ရမှတ် ၁၁ မှတ်နဲ့ အဆင့် ၁ နေရာကို ရယူနိုင်ခဲ့ပြီး ဖိုင်နယ်အဆင့်ကို တက်ရောက်နိုင်သွားပါတယ်။
UEFA ပြိုင်ပွဲများတွင် လူစားလဲမှု ၅ ကြိမ် ခွင့်ပြုမည်
UEFA က ကျင်းပမယ့်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ အခု ရာသီကုန်အထိ လူစားလဲမှု ၅ ကြိမ်အထိ ပြုလုပ်ခွင့်ပေးသွားပါမယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပွဲစဉ်တွေ နီးကပ်နေမှုကြောင့် လူစားလဲမှု အရေ အတွက်ကို ပြောင်းလဲဖို့ ဖီဖာက အဆိုပြုခဲ့တာပါ။ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းတွေရဲ့ ကန့်ကွက်မှုကြောင့် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာတော့ လူစား လဲခွင့် အရေအတွက်ဟာ ပြောင်းလဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ၅ ဦးအထိ လူစားလဲခွင့်ကို ချန်ပီယံလိဂ်နဲ့ယူရိုပါလိဂ်တို့လို ဥရောပပြိုင်ပွဲတွေမှာ ကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ UEFA ဥက္ကဌ အလက်ဇန်းဒါး စီဖာရင်ကပြောပါတယ်။ Nations League အပါအဝင် ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်း ဒီနည်းစနစ်ကို အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လာမယ့်နှစ် ကျင်းပမယ့် ဥရောပချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာတော့ အသုံးပြုဖြစ် မလားဆိုတာ မသေချာသေးပါဘူ။ “ကလပ်အသင်းနဲ့ နိုင်ငံအသင်းတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးချိန်မှာတော့ ဒီရာသီ ကုန်အထိ ကလပ်အသင်းတွေနဲ့ နိုင်ငံအသင်းတွေရဲ့ ပြိုင်ပွဲမှာ လူစားလဲမှု ငါးခုအထိအသုံးပြုသွားဖို့ အမှုဆောင်ကော်မတီက ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်” လို့ ဖီဖာဥက္ကဋ္ဌက ပြောပါတယ်။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကမ္ဘာ့ဘောလုံးသမားများအဖွဲ့ Fifpro အဖွဲ့ကလည်း ထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ မန်ချက်စတာစီးတီးနည်းပြ ပက်ဂွါဒီယိုလာ၊ လီဗာပူးနည်းပြ ယာဂန်ကလောပ်နဲ့ ချဲလ်ဆီး နည်းပြ ဖရန့်လမ်းပတ်တို့ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာလည်း လူစားလဲမှု ၅ ကြိမ်ပြုလုပ်ဖို့ကို လိုချင်ခဲ့ ကြပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေ ရပ်နားပြီး ပြန်လည်စတင်ခဲ့တဲ့ ပြီးခဲ့ရာသီ နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်မန်နေဂျာတွေဟာ အသင်းလူစာရင်းကို ကစားသမား အယောက် ၂၀ အထိ ထည့်သွင်းခွင့်ရခဲ့ပြီး လူစားလဲမှု ၅ ကြိမ်လည်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုချိန်မှာတော့ ဒီစည်းမျဉ်းကို ပြောင်းလဲကာ မူလအတိုင်း ၁၈ ဦးလူစာရင်းနဲ့ လူစားလဲမှု ၃ ကြိမ်သာ လုပ်ဆောင်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥရောပစူပါဖလားပွဲစဉ်အဖြစ် ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းနဲ့ ဆီဗီလာအသင်းတို့ဟာ ဘူဒါပတ်မှာ ယှဉ်ပြိုင် ကစားသွားဖို့ ရှိနေပြီး ဒီပွဲစဉ်အတွက် UEFA က လက်မှတ် ၁၅၅၀၀ စောင်ရောင်းချ ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲဟာ မတ်လနှောင်းပိုင်း ပရိတ်သတ်တွေ ဝင်ခွင့်ပြုတဲ့ပထမဆုံးသော UEFA ပွဲစဉ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မက်ဆီနှင့်ရော်နယ်ဒိုမပါသည့် UEFA၏ ဆန်ကာတင်အကောင်းဆုံးကစားသမား ၃ ဦးစာရင်းထွက်
UEFA တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုအတွက် နောက်ဆုံးဆန်ကာတင် ၃ ဦးကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီး ဒီစာရင်းမှာ မက်ဆီနဲ့ရော်နယ်ဒိုတို့ မပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာ ၁၀ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်သူတို့ ၂ ဦး မပါဝင်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျူဗင်တပ်စ်တိုက်စစ်မှူး ရော်နယ်ဒိုဟာ ဒီဆုကို ၃ ကြိမ်ရရှိခဲ့ပြီး ဆန်ကာတင်စာရင်းမှာ ၉ ကြိမ် တိတိပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာတိုက်စစ်မှူး မက်ဆီကတော့ ဆု ၂ ကြိမ်ရရှိခဲ့ဖူးသူဖြစ်ကာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်အတွင်း ဆန်ကာတင်စာရင်းကို ၆ ကြိမ်ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကစာသမား ၂ ဦးဟာ သူတို့မျိုးဆက်ရဲ့ အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေအဖြစ် ဆယ်စုနှစ် တခုကျော်ကြာ မှတ်ကျောက်တင်ခံနိုင်ခဲ့သူတွေပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ နှစ်ဦးစလုံးဟာ အသက် ၃၀ ကျော်အရွယ်ကို ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီတာကြောင့် တဦးချင်းအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ တဖြည်းဖြည်းဝေးကွာလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရော်နယ်ဒိုရဲ့ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ ၁၆ သင်းအဆင့်ကနေ လှည့်ပြန် ခဲ့ရပြီး မက်ဆီရဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းကလည်း ချန်ပီယံဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းကို အရှက်တကွဲ ရှုံးနိမ့်မှုနဲ့အတူ ဆီမီးအဆင့်ကနေ ထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်။ ရော်နယ်ဒိုဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီချန်ပီယံလိဂ်မှာ ၃ ဂိုးသာ သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး မက်ဆီဟာလည်း ၃ ဂိုးပဲ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ဆန်ကာတင်စာရင်းမှာ မန်စီတီးကွင်းလယ်လူ ကယ်ဗင်ဒီဘရိုင်း၊ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်တိုက်စစ်မှူး ရောဘတ်လီဝန်ဒေါစကီးနဲ့ ဂိုးသမား မန်နျူရယ်နော်ယာတို့ ပါဝင်နေ ပါတယ်။ ဒီဘရိုင်းနဲ့လီဝန်ဒေါစကီးတို့ နှစ်ဦးထဲက တဦးဟာ ဒီဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်း သတင်းကြီးနေပါတယ်။ ဒီဆုကို လီဗာပူးနောက်ခံလူ ဗန်ဒိုက်က ပြီးခဲ့တဲနှစ်မှာ ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ လီဗာပူးအသင်းဟာ အက်သလက်တီကို အသင်းကို ရှုံးနိမ့်ပြီး ရှုံးထွက်အဆင့်ကနေ ထွက်ခွာခဲ့ရတာကြောင့် ဒီနှစ်ဆန်ကာတင် စာရင်းမှာ ပါဝင်လာခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။ UEFA တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကို အောက်တိုဘာ ၁ ရက် ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စု မဲခွဲမှု မတိုင်ခင် ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမှာဖြစ်ပြီး အကောင်းဆုံးနည်းပြဆုအတွက် ဆန်ကာ တင်စာရင်းမှာ လီဗာပူးနည်းပြ ယာဂန်ကလော့ပ်၊ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နည်းပြ ဟန်ဆီဖလစ်နဲ့ လိုက်ပစ်ဇ် နည်းပြ နာဂယ်စ်မန်းတို့ ပါဝင်နေပါတယ်။
မန်စီးတီးကို ဥရောပပြိုင်ပွဲများ ဝင်ရောက်ခွင့် ပိတ်ပင်ထားသည့် ဆုံးဖြတ်ချက် UEFA ပယ်ဖျက်
UEFA ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ၂ နှစ် ဝင်ရောက်ခွင့် ပိတ်ပင်ခံထားရတဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကို အားကစားဆိုင်ရာ ခုံသမာဓိရုံး CAS က ပယ်ဖျက်လိုက်တာကြောင့် မန်စီးတီးအသင်းဟာ နောက်ရာသီမှာ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲကို ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိသွားပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ချိုးဖောက်ခဲ့တာကြောင့် မန်စီးတီးအသင်းဟာ ပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ခွင့် ပိတ်ပင်ခံရခြင်းနဲ့အတူ ပေါင် ၂၅ သန်းလည်း ဒဏ်ငွေ ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ မန်စီးတီးအသင်းဟာ ဘဏ္ဍာရေးအရ မျှတစွာယှဉ်ပြိုင်ရေး စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီဖို့အတွက် စပွန်ဆာတွေကနေ ရရှိတဲ့ ဝင်ငွေကို မသမာမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုချိန်မှာတော့ ဒီပြစ်ဒဏ်ကို ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီဖြစ်ပြီး ပေးဆောင်ရမယ့် ဒဏ်ငွေပမာဏဟာလည်း ပေါင် ၈ ဒသမ ၉ သန်းအထိ လျော့ကျသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ “စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရ CFCB ရဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမှာ မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ ပျက်ကွက်မှုတွေအတွက် အသင်းကို UEFA ရဲ့ ကလပ်အသင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဝင်ရောက်ခွင့် ၂ နှစ် ပိတ်ပင်ဖို့ မသင့်တော်ကြောင်း တွေ့ခဲ့ရတယ်” လို့ CAS က ထုတ်ပြန်တဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ပြောင်းလဲလိုက်တဲ ဆုံးဖြတ်ချက်အပြည့်အစုံကို မကြည့်ရှုရသေးပေမယ့် မန်စီးတီးနဲ့ အသင်းရဲ့ဥပဒေအဖွဲ့တို့ဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်အသစ်ကို ကြိုဆိုကြောင်းနဲ့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ရာမှာ ပါဝင်ခဲ့သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်လည်း မန်စီးတီအသင်းက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ UEFA ဘက်က ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ မန်စီးတီးအသင်းအပေါ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မန်စီးတီးအသင်းဟာ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ အဆင့် ၂ ရရှိဖို့ သေချာနေပြီ ဖြစ်တာကြောင့် နောက်ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ သူတို့ကို ထပ်မံတွေ့ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုနှစ် ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာလည်း ဂွါဒီယိုလာနဲ့ အသင်းသားတွေဟာ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းနဲ့ အတူ ၁၆ သင်းအဆင့် ဒုတိယအကျော့ပွဲစဉ်ကို ကစားရဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ပထမအကျော့ပွဲစဉ်မှာ မန်စီးတီးအသင်းက ၂ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရရှိထားပြီး ရီးရဲလ်ကိုသာ ကျော်ဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုရင် လိုင်ယွန် ဒါမှမဟုတ် ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းနဲ့ နောက်တဆင့်မှာ တွေ့ရဖို့ ရှိနေပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ် ဆက်မကစားဖြစ်ပါက လီဗာပူးကို ချန်ပီယံဆုဖလားပေးရန် UEFA တိုက်တွန်း
ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲ ဆက်မကစားဖြစ်ပါက လီဗာပူးအသင်းကို ချန်ပီယံဆုဖလား ပေးသင့်ကြောင်း ဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ လိဂ်အသီးသီးက တာဝန်ရှိသူတွေဟာ ကြာသပတေးနေ့က ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲကို ဆက်လက်ကျင်းပဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင် လက်ရှိ အမှတ်ပေးဇယား ရပ်တည်မှုအရ လီဗာပူးအသင်းကို ချန်ပီယံဆုဖလားပေးသင့်ကြောင်း တိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲကို ကွင်းပိတ်ကျင်းပဖို့ ဆွေးနွေးမှုတွေ ရှိပေမယ့်လည်း လက်ရှိအချိန်အထိ ပြန်လည်ကျင်းပနိုင်ဖို့ မသေချာသေးတာပါ။ လက်ကျန် ၉ ပွဲအလိုမှာ လီဗာပူးအသင်းက ဒုတိယနေရာက မန်စီးတီးကို ၂၅ မှတ်အထိ ဖြတ်ထားတာပါ။ တခြားဥရောပဝင်ခွင့်နဲ့ တန်းဆင်းတန်းတက်အတွက် ဆုံးဖြတ်ရာမှာတော့ လက်ရှိ အမှတ်ပေးဇယားအတိုင်း သို့မဟုတ် ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲအရေအတွက်နဲ့ တပွဲပျမ်းမျှ အမှတ်ရရှိမှု စတဲ့ အချက်တွေနဲ့လည်း ဆုံးဖြတ်ဖို့ အကြံပေးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲ သြဂုတ် ၂၉ ရက်နေ့ ကျင်းပနိုင်ရန် UEFA မျှော်မှန်း
ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲစဉ်ကို သြဂုတ် ၂၉ ရက်မှာ ကျင်းပနိုင်ဖို့ ဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်က မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်တွေဟာ ၁၆ သင်းအဆင့် ဒုတိယအကျော့ပွဲစဉ်တွေ ကစားနေစဉ်မှာပဲ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့မှုကြောင့် ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရတာပါ။ ဗိုလ်လုပွဲစဉ်ကို တူရကီနိုင်ငံ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့မှာပဲ သြဂုတ် ၂၉ ရက်နေ့ ကျင်းပဖို့ လျာထားပါတယ်။ အဲဒီရက်မှာ ကစားနိုင်ဖို့အတွက် ဥရောပလိဂ်ပွဲစဉ်တွေကို ဇူလိုင်လအတွင်းမှာ စတင်ကစားနိုင်ဖို့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်မှာ ပီအက်စ်ဂျီ၊ အက်တလန်တာ၊ အက်သလက်တီကိုနဲ့ လိုက်ဇစ်အသင်းတွေက ကွာတားဖိုင်နယ် တက်ရောက်ထားပါတယ်။ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်နဲ့ မန်စီးတီး၊ ချဲလ်ဆီးနဲ့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်၊ လီယွန်နဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်၊ ဘာစီလိုနာနဲ့ နာပိုလီပွဲစဉ်တွေကိုတော့ ဒုတိယအကျော့ အဆုံးအဖြတ်ပွဲစဉ်တွေ ကစားဖို့ ကျန်ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲ ၁ နှစ် ရွှေ့ဆိုင်းရန် UEFA အရေးပေါ် ဆွေးနွေးမည်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှု ပြင်းထန်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး UEFA က အင်္ဂါနေ့မှာ အရေးပေါ် အစည်းအဝေး ကျင်းပဖို့ စီစဉ်ခဲ့ကာ ဒီအစည်းအဝေးမှာ ပြိုင်ပွဲကို တနှစ်နောက်ဆုတ်ကျင်းပရေး ထည့်သွင်းဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုအရေးယူဆောင်ရွက်ရမလည်းဆိုတာကို ဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်က ဗွီဒီယိုညီလာခံကျင်းပမှာပါ။ ဒီဆွေးနွေးမှုတွေမှာ ယူရို ၂၀၂၀ အပါအဝင် ပြည်တွင်းဘောလုံးပွဲတွေနဲ့ ဥရောပ ပြိုင်ပွဲအားလုံးရဲ့အခြေအနေတွေလည်း ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ယူရို ၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲကို ဥရောပတလွှားက ကွင်းတွေမှာ လာမယ့် ဇွန် ၁၂ ရက်နေ ဇူလိုင် ၁၂ ရက်အထိ ကျင်းပဖို့ စီစဉ်ထားတာပါ။ ဒီအစည်းအဝေးအတွက် UEFA က အဖွဲ့ဝင်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ၅၅ ခုက ကိုယ်စားလှယ်တွေအပြင် ဥရောပကလပ်အဖွဲ့ချုပ်၊ ဥရောပလိဂ် နဲ့ ကမ္ဘာ့ကစားသမားများယူနီယံ Fifpro တို့က ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်း ဖိတ်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ခြိမ်းခြောက်မှု ပြင်းထန်လာတာကြောင့် အခုလိုအရေးပေါ် အစည်းအဝေးခေါ်ယူခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး ပွဲစဉ်တွေကို နှစ်ပတ်တိတိရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီလို့ လာလီဂါက ကြာသာပတေး နေ့မှာ ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ ဒိန်းမတ်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကလည်း နိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့ ဘောလုံးပွဲ ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေကို နှစ်ပတ်တိတိပိတ်ပင်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး နယ်သာလန် အာရီဒီဘီစီကလည်း ပွဲစဉ်တွေကို မတ် ၃၁ ရက်အထိ ရပ်နားကြောင်းကြေညာပါတယ်။ အီတလီစီးရီးအေမှာလည်း ကစားသမားနှစ်ဦးဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစပ်ခံထားရကြောင်း တွေ့ခဲ့ရပြီး ပွဲစဉ်တွေကို ဧပြီ ၃ ရက်အထိရွေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ပြင်သစ်ထိပ်တန်းလိဂ်နှစ်ခုက ပွဲစဉ်တွေကို ပရိသတ်မပါဘဲ ကစားစေခဲ့ပြီး ဥရောပလိဂ် ၁၆ သင်းအဆင့်ပွဲစဉ် နှစ်ခုကို ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ကာ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ယူရိုပါလိဂ်ပွဲအပါအဝင် ပွဲစဉ်တော်တော်များများကိုလည်း ပရိသတ်မပါဘဲ ကစားစေမယ်လို့ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ် လက်စတာစီးတီး အသင်းရဲ့ ကစားသမားသုံးဦးမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေတွေ့ခဲ့ရပေမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်တွေကို တစုံတရာပြောင်းလဲဖို့ အခုအထိကြေညာခြင်း မရှိသေးပါဘူး။
ပရီးမီးယားလိဒ္အသင္းမ်ား ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံျပင္ပ အပုိပြဲ ကစားရန္ UEFA ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္
ပရီးမီးယားလိဒ္အသင္းတိုင္း ေဘာလံုးရာသီအၿပီး အပိုပဲြအျဖစ္ ၃၉ ပဲြေျမာက္ စုစုေပါင္း ၁၀ ပဲြကို ၿဗိတိန္နိုင္ငံျပင္ပမွာ ကစားဖို႔ အစီအစဥ္ကို UEFA က လက္မခံေလာက္ဘူးလို႔ UEFAရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဂီယန္နီ အင္ဖန္တီႏို (Gianni Infantino) က ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔က ေျပာဆိုပါတယ္။ [caption id="attachment_67385" align="alignright" width="339"] ဂီယန္နီ အင္ဖန္တီႏို[/caption] ပရီးမီယားလိဒ္က ဒီအစီအစဥ္ကို ဆက္လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ UEFA နဲ႔ ေဆြးေႏြးရမယ္လို႔ ေျပာဆုိ ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္ကို ၂၀၀၈ ခုနွစ္က ပရီးမီယားလိဒ္က အဆိုျပဳခဲ့ေပမယ့္ UEFA က ျငင္းဆန္ခဲ့ပါတယ္။ UEFA ရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဂီယန္နီ အင္ဖန္တီႏိုက “UEFA ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ကို ၾကည့္ရမွာပါ။ အရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပင္လိမ္မယ္လို႔ သိပ္မထင္ပါဘူး။ ကမၻာ့ေဘာလံုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံဟာ ပစ္ရမစ္ပံုစံ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုလည္း သတိခ်ပ္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး ဒီလို ကိစၥမ်ဳိးေတြကို ပံုစံတက် ေဆာင္ရြက္ရမွာပါ” လို႔လည္း ေျပာဆိုပါတယ္။ UEFA ဥကၠ႒ ပလာတီနီကေတာ့ ဒီအယူအဆကို လက္မခံပဲ ေဘာလံုးအတြက္ လည္း ေကာင္းတဲ့ကိစၥ မဟုတ္လို႔ ဖီဖာကလည္း ဘယ္ေတာ့မွ လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာဆိုပါတယ္။ ဒီ ၃၉ ပဲြေျမာက္ပဲြေျမာက္အစီအစဥ္ကို UEFA က လက္မခံဘူး ဆိုေပမယ့္ FIFA အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ မရွိတဲ့နိုင္ငံေတြနဲ႔ ေဒသေတြမွာ ပရီးမီယာလိဒ္က ျဖစ္ေအာင္ က်င္းပမယ္ဆိုရင္ UEFA က တားျမစ္ခြင့္ရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
After Finnish resistance toaserious Soviet offensive in June and July 1944 led toastandstill, the2sides reached an armistice. This was followed by the Lapland War of 1944–1945, when Finland fought retreating German forces in northern Finland. Perhaps the most well-known warfare heroes through the aforementioned wars had been Simo Häyhä, Aarne Juutilainen, and Lauri Törni. After the 1917 February Revolution, the position of Finland as part of the Russian Empire was questioned, primarily by Social Democrats.
Swedish became the dominant language of the nobility, administration, and training; Finnish was chieflyalanguage for the peasantry, clergy, and local courts in predominantly Finnish-speaking areas. During the Protestant Reformation, the Finns gradually transformed to Lutheranism. At the end of the ninth century, indigenous artifact tradition, especially women's jewelry and weapons, had extra frequent local features than ever before. This has been interpreted to be expressing frequent Finnish id which was born fromapicture of widespread origin. If the archeological finds from Wolf Cave are the result of Neanderthals' actions, the first people inhabited Finland approximately 120,000–a hundred thirty,000 years ago.
These hungry aquatic predators can simply be caught by anyone danglingahooked worm onaline tied toafishing rod or the tip ofadepartment. But they are additionally broadly trawled and traded by Finnish business fishermen. Fried, grilled or baked perch makesatasty meal, and conventional dishes such as perch soup or rye loaf stuffed with perch are popular in lots of rural regions. The whooper swan isasleek, northern, pure white, wild swan that features in Finnish folklore and culture, from the Kalevala folk epic to the works of composer Jean Sibelius. During the early twentieth century the numbers of whooper swans in the wild declined steeply, till by the Fifties fewer than twenty pairs bred in Finland. The swans have since recovered after being efficiently spotlighted asafigurehead species for Finland’s nascent nature conservation motion; and right now Finland is residence to about 6,000 whoopers.
There'sakinky, punkish undercurrent toafew of their work that must pervade parts of the nation. Provides details about Personal Protective Equimpment for girls in development. The number of women employed within the U.S. construction trade grew considerably, by eighty one.three% from 1985 to 2007; nevertheless, due toaloss of over 2.5 million building jobs from 2007 to 2010, there has beenasharp decline of ladies working. As illustrated below in Table I , and since its peak in 2007, greater than 300,000 women workers left the development business by 2010. Of these, approximately 200,000 were employed in production occupations, such as laborers, electricians, plumbers, and so on.
Granite was chosen as Finland’s nationwide rock type inapostal ballot run by the Finnish Science Centre Heureka andageological institute in 1989. Outcrops of historical pinkish or greyish granitic bedrock two billion years old or more could be seen in nearly all regions of Finland. Attractive and sturdy granite may also be broadly seen in Finland’s cities and towns in monuments, sculptures and prominent buildings.
In phrases of medals and gold medals won per capita, Finland is the most effective performing nation in Olympic historical past. Finland first participated asanation in its own proper at the Olympic Games in 1908, while still an autonomous Grand Duchy inside the Russian Empire. At the 1912 Summer Olympics, nice satisfaction was taken in the three gold medals gained by the original "Flying Finn" Hannes Kolehmainen. Finland's men's national ice hockey staff is ranked as probably the greatest on the earth. The group has received three world championship titles and six Olympic medals.
Finlands Nationwide Tree: Silver Birch
As of 2019, there were 423,494 individuals withaforeign background dwelling in Finland (7.7% of the inhabitants), most of whom are from the former Soviet Union, Estonia, Somalia, Iraq and former Yugoslavia. The youngsters of foreigners usually are not routinely given Finnish citizenship, as Finnish nationality law practices and keep jus sanguinis coverage where only children born toaminimum of one Finnish mother or father are granted citizenship. If they're born in Finland and cannot get citizenship of some other country, they turn into residents. 387,215 folks in Finland in 2018 were born in another country, representing 7% of the population. The 10 largest overseas born groups are from Russia, Estonia, Sweden, Iraq, Somalia, China, Thailand, Serbia, Vietnam and Turkey.
An increasingly vocal elite in Finland quickly determined that Finnish ties with Sweden were turning into too costly, and following Russo-Swedish War (1788–1790), the Finnish elite's want to interrupt with Sweden only heightened. In the 18th century, wars between Sweden and Russia twice led to the occupation of Finland by Russian forces, occasions known finnish girls to the Finns as the Greater Wrath (1714–1721) and the Lesser Wrath (1742–1743). It is estimated that nearlyawhole generation of younger men was lost in the course of the Great Wrath, due mainly to the destruction of houses and farms, and to the burning of Helsinki.
Common Month-to-month Pension In 2020 In Finland: 1,762 Euros
Finnish law is codified and based mostly on Swedish regulation and inawider sense, civil legislation or Roman law. The courtroom system for civil and legal jurisdiction consists of native courts (käräjäoikeus, tingsrätt), regional appellate courts (hovioikeus, hovrätt), and the Supreme Court (korkein oikeus, högsta domstolen). The administrative department of justice consists of administrative courts (hallinto-oikeus, förvaltningsdomstol) and the Supreme Administrative Court (korkein hallinto-oikeus, högsta förvaltningsdomstolen). In addition to the regular courts, there areanumber of special courts in certain branches of administration. There can beaHigh Court of Impeachment for felony expenses towards certain excessive-rating officeholders. The Constitution of Finland defines the political system; Finland isaparliamentary republic within the framework ofarepresentative democracy.
The area that is now Finland was settled in, at the newest, round 8,500 BC during the Stone Age in direction of the tip of the final glacial interval. The artifacts the first settlers left behind current characteristics which are shared with those found in Estonia, Russia, and Norway.
The capital area – comprising Helsinki, Vantaa, Espoo and Kauniainen – formsasteady conurbation of over 1.1 million individuals. However, frequent administration is restricted to voluntary cooperation of all municipalities, e.g. in Helsinki Metropolitan Area Council. Even in the south, the harshest winter nights can see the temperatures fall to −30 °C (−22 °F) though on coastal areas like Helsinki, temperatures under −30 °C (−22 °F) are uncommon. Climatic summers (when imply day by day temperature stays above 10 °C or 50 °F) in southern Finland last from about late May to mid-September, and within the inland, the warmest days of July can attain over 35 °C (ninety five °F). Although most of Finland lies on the taiga belt, the southernmost coastal areas are typically categorised as hemiboreal. The endangered Saimaa ringed seal , one of solely three lake seal species on the planet, exists only in the Saimaa lake system of southeastern Finland, all the way down to solely 390 seals right now.
The second suggestion is that young men would go to neighbouring villages, and abduct women to forcibly marry, usually women who had been already married. WILMA Women’s Health Centre is committed to making sure that all these elements are thought of when offering companies on the Centre. Use this google translate tool to translate our web site into the language you are familiar with.
Variety Of New Incapacity Pension Recipients Decreased In 2020
Ministry for Foreign Affairs / Department for Communication and Culture / Unit for Promotion and Publications / Embassy and Consulates General of Finland in China. The position that the regional councils serve on Mainland Finland are on the Åland Islands handled by the autonomous Government of Åland. Note these are state religious registration numbers, folks could also be registered but not working towards/believing and they may be believing/practicing however not registered. Especially since the 2014 FIBA Basketball World Cup, Finland's nationwide basketball group has acquired widespread public attention. Finnish skaters have gained eight world championships and 13 junior world cups in synchronized skating, and Finland is taken into account one of the best nations at the sport.
As of 2007, Finland has roughly the bottom industrial electrical energy costs within the EU-15 . Private sector workers quantity to 1.8 million, out of which arounda3rd with tertiary education. The common value ofanon-public sector worker per hour was €25.10 in 2004. As of 2008, common buying energy-adjusted earnings levels are just like those of Italy, Sweden, Germany, and France. In 2006, 62% of the workforce labored for enterprises with lower than 250 employees they usually accounted for forty nine% of total enterprise turnover and had the strongest rate of development. Gender segregation between male-dominated professions and female-dominated professions is higher than within the US.
In addition, Sinden can also be commonly referred to as "Waranggana" which is taken fromamix of the words "wara" and "anggana". The word wara itself means somebody who's female and anggana which implies itself. Because in historical times, waranggana was the one woman in the Wayang or Klenengan efficiency. The figures of the wayang are also current in the work of that point, for instance, the roof murals of the courtroom in Klungkung, Bali. They are still present in traditional Balinese portray today. The figures are painted, flat (5 to at most 15 mm — about half an inch — thick) woodcarvings with movable arms.
They are constructed equally to wayang kulit figures, but from thin items of wood instead of leather, and, like wayang kulit figures, are used as shadow puppets. A additional similarity is that they're the identical smaller measurement as wayang kulit figures. However, wood is extra subject to breakage than leather. On this basis the wayang klitik figures, that are to seem in plays where they have to endure battle scenes, have leather arms. The name of those figures is onomotopaeic, from the sound klitik-klitik that these figures make when worked by the dalang. ) are three-dimensional picket rod puppets that are operated from below byawooden rod that runs via the physique to the top, and by sticks related to the hands.
You won't ever be bored whereas spending time with the girl from this country. Most of the women in Russia have gotten higher training.
Uncover Canyoning In Bali: Kalimudah Canyon
In the course of time, it spread to turn intoapopular and folk type as well. Wayang klitik figures come originally from eastern Java, the place one still finds workshops turning them out. They are less expensive to produce than wayang kulit figures.
Wayang today is both essentially the most historic and the most popular form of puppet theatre on the planet. Hundreds of people will keep up all night time long to watch the famous person performers, dalang, who command extravagant fees and are international celebrities. Some of essentially the most well-known dalang in current history are Ki Nartosabdho, Ki Anom Suroto, Ki Asep Sunandar Sunarya, Ki Sugino, and Ki Manteb Sudarsono. The dalang, typically known as dhalang or kawi dalang, is the puppeteer behind the performance. It is he who sits behind the screen, sings and narrates the dialogues of various characters of the story.
Man In Bright Orange Hoodie Stalks A Woman Alongside Melbourne Street
They have to broaden their horizons and to find their future husbands among men from other international locations. They handle to combine work, household, and social life. They don’t prefer to complain and keep optimistic in every scenario. Russian nationality doesn’t have widespread appearance features for all the inhabitants. All the ladies from this country are completely different.
But her opening-evening Garden of Eden efficiency was so well acquired that the audience screamed her name until the startled actress was brought from her dressing room inatowel to takeacurtain call. Verdon acquiredapay improve and her first Tony Award for her performance. Children2, together with Nicole FosseGwyneth Evelyn "Gwen" Verdon (January 13, 1925 – October 18, 2000) was an American actress and dancer.
Many of them like to learn and have broad horizons and plenty of hobbies. Russian girls are proud and self-assured. And they recognize when somebody exhibits them that he sees that they are sexy. They like to emphasise their sexuality with the assistance of sporting brief clothes or very tight denims. Also, many of them show their passion with their behavior. Beautiful Russian women are among the many most tasty females on the earth.
Not all folks know English at the stage which allows keepingafull-worth dialog. But nonetheless https://yourmailorderbride.com/balinese-women, there are some women whose English is fluent. To find it out for sure ask her if she speaks English while getting acquainted.
Wayang Kancil isakind of shadow puppet with the primary character of kancil and other animal tales taken from Hitopadeça and Tantri Kamandaka. Wayang Kancil was created by Sunan Giri on the finish of the fifteenth century and is used asamedium for preaching Islam in Gresik. The story of kancil may be very popular with the youngsters, hasahumorous factor, and can be utilized asamedium of education asaresult of the message conveyed via the Wayang Kancil media is superb for kids. Wayang kancil isn't totally different from wayang kulit, wayang kancil can be created from buffalo pores and skin. Even the playing just isn't much totally different, accompanied byagamelan.
The pic quickly attracted tons of of feedback, with many blasting the beachgoer for her “inconsiderate” choice of apparel and never showing “cultural sensitivity” in the largely Muslim country. The picture of the scantily clad woman queuing on the counter wearing simply the skimpy thong andastring prime was shared onaFacebook web page for expats. Come with us onajourney to the magical Indonesian islands of Bali & Java, where artistry isalifestyle, and soothing tropical vibes ease away all stress and pressure.
So, there aren't any women in Russia who can’t prepareascrumptious meal. Also, they like order and don’t tolerate the mess in their homes. So, you may be sure that your family neighborhood will always be cozy and comfortable to live in. Expressiveness and loud conduct in everyday life are not concerning the ladies of this nationality.
One of the report’s primary finding is the necessity to concentrate on lowering gender disparities and vulnerability in remote rural areas that are home to small ethnic groups. These groups are at explicit danger of being left behind regardless of fast financial growth.
Seeashort conventional marionette puppet performance oraefficiency by youth actors depicting Thai mythology. Centuries ago, the individuals of Thailand and Laos harnessed the forces of nature to createaverdant, harmonious, and deeply non secular paradise. Travel with AdventureWomen nicely off the overwhelmed path in Southeast Asia to live as the locals do, discovering the area’s most spectacular websites, iconic temples, and wonderfully welcoming people of these two nations. In authorities meetings, while there may be women current, they're principally not taking part.
Due to his report in Laos in the course of the Vietnam War, the Hmong all over the world have heard of him or have respect for the man. According to the 2000 census, the Hmong are the one ethnically primarily based population withamedian age beneath 20. Fifty-six percent of Hmong are underneath the age of 18 compared to twenty-five % of the whole US population. The median age for Hmong in the US is 16.1 years in comparison with 35.three years for the whole US inhabitants.
Traditionally, the norm in marriage is to lift households with massive numbers of children. Children typically develop up with their wants responded to quickly and help in the work ofafamily atayoung age. In Laos, at four,5or6years oldachild helps keep watch on the house, doing duties like hauling water, shucking, milling corn, and carryingachild sibling; normally women from laosagrandmother, uncle or other adult can be close by in the cluster of household homes. Most conventional Hmong families don't wish to hear direct feedback about their kids, particularly infants and infants. Hmong believe that ifafoul spirit hears such feedback, it would come and take the child’s soul away.
Touring Around Laos Solo
The constitution prohibits all mass media activities that run contrary to ‘nationwide interests,’” according to Human Rights Watch. On Monday Laos announced new rules for people coming into the nation including self-quarantine for people arriving from nations with more than 100 cases. Officials are hoping to remain considered one of solely two Southeast Asian nations that has no confirmed instances, along with Myanmar. The Laos government has yet to substantiateacase of the virus in the landlocked nation that borders China, Myanmar, Thailand, Cambodia, and Vietnam. A leaked doc from the coronavirus task force stated the federal government has checked 85 suspected circumstances, with eighty one coming again adverse. Lao women are youthfully engaging inameans that seems distinctive to the ladies of South East Asia. Lao women additionally accept personal responsibility for care of the household they usually look after their loved ones through unhealthy instances and good.
Thirty-six percent of farms use one hectare or less, 36% use between one and two hectares and 27% use more than two hectares. In addition to private use land, many rural households also use village land and communal forests (World Bank 2006b; Gorsuch 2007; FAO 2008; GTZ 2009; FAO 2012b). About 17% of Lao PDR’s land area is nationally protected (CIA 2012; World Bank 2012a).
People could consider the quantity of blood within the body to be finite and never rejuvenating, and so they could resist blood draws. There could also be resistance to vaccines and problems of adherence to treatments that require lengthy-time period sustained use of medicine. In most cases, Hmong will willingly use drugs that brings observable results. A shaman is the supreme religious healer whose major means of affected person care is to journey to the spirit world. Shamans are normally well-known, nicely respected, and principally male though some are feminine, and are key figures in traditional tradition. It is alleged that shamans don't search the calling but that the spirits call them to the non secular therapeutic practice.
In practice, provincial police, immigration police, village-degree authorities, the Lao Women’s Union , and NGOs identify victims and should report instances to the ATD. Overseas, Lao diplomatic officers are answerable for identifying victims and reporting instances to the ATD or Ministry of Foreign Affairs; the federal government reported that these diplomats continued to employ the sufferer identification guide. However, the ATD may not count or observe victims who decline official help. Authorities in neighboring nations recognized most Lao victims exploited overseas. The Government of Laos doesn't fully meet the minimum standards for the elimination of trafficking however is making significant efforts to take action. The authorities demonstrated overall rising efforts compared to the previous reporting interval; subsequently Laos was upgraded to Tier 2. These efforts included investigating the nation’s first domestic trafficking instances involving overseas victims and securing its first conviction for domestic trafficking.
For us an enormous thing while we travel is food, and Loas had the the least memorable food on our trip all through Southeast Asia. They have great little hotels which might be very low-cost in comparison with Thailand. Eating or strolling by the Mekong river is fantastic especially at night time. I wouldn’t anticipate Laotians to be unhappy people though, the numerous instances I had to cope with these cultures (like indonesians/thai/philipinos) they had been all the time so sort and happy, regardless of in the event that they have been serving coffee or moping the soiled flooring. I always admired such nature, and it’s frowning to know that laotian aren’t the identical. In Vientiane we foundanice, native restaurant, the ‘Three Sisters’ reverse of Wat Chanh , where they serve scrumptious noodle soups and some nationwide dishes. We tasted different sandwiches for the primary day and we liked them lots.
Laab , finely chopped meat with spices, isafavourite dish that may be eaten raw or cooked. Relatively little pork is eaten, and hen, buffalo, or beef is extra widespread. An necessary culinary change in the principle cities for the reason that revolution isaselection of dog eating, which previously was associated with Vietnamese and Sino-Viet groups. Dog meat is taken into accounta"robust" male dish and is accompanied by sturdy liquor.
A Growing New Health Disaster Focusing On Emergency Rooms, Medical History & Vaccines
The three employees are currently incarcerated in Samkhe prison in Vientiane. Ahead of internet hosting the 2016 Association of Southeast Asian Nations Summit, the government of Laos began to monitor social media usage carefully, and detained residents for posts it felt threatened the image of the country.
Popular songs leave politics aside and infrequently take care of romantic love. Graphic arts are nearly totally dependent on conventional Buddhist themes, which are expressed in an architectural kind as murals or carvings on temple doorways and window shutters. There is not any developed practice of the fantastic arts, and cartooning disappeared after 1975. The different primary form of visible art is silk and cotton woven material with elaborate and subtle patterns and colours. Among the Lao, cremation is practiced besides for many who have anomalous deaths, such as women who die in childbirth.
We heard that apart from one family-run movie theatre in Vientiane, there is just one extra cinema in Laos, in Luang Prabang. They displayamovie every day at7pm, free of charge, and the one requirement is to orderameal oracup of tea, findagood space on the comfy flooring mats, on the chair or on the bench, and watch the film you choose from the weekly programme. Critical well being issues for Hmong people within the US embrace diabetes, hypertension, kidney issues, hepatitis A, and psychological well being. The modifications in food regimen, especially consumption of meals excessive in sugar and fats, and lack of expertise about screening providers are potential reasons for the increasing prevalence of diabetes, hypertension, kidney and hepatitis A. Feelings of isolation and helplessness are potential reasons for lots of the undiagnosed/untreated mental well being circumstances among Hmong adults and elderly.
ပင်နယ်တီ ၂ လုံးအထိ လွဲခဲ့သည့် စံချိန်ရှင်ရာမို့စ်ကို စပိန်နည်းပြ ကာကွယ်ပြောဆို
မနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ပွဲမှာ ပင်နယ်တီ ၂ လုံးလွဲခဲ့သူ စံချိန်ရှင် ဆာဂျီယိုရာမို့စ်ကို စပိန်နည်းပြ လူးဝစ္စ အင်းနရစ်က ကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဆွစ်ဇာလန်နဲ့ပွဲမှာ ရာမို့စ်ဟာ ဘူဖွန်ရဲ့စံချိန်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီး ဥရောပဘောလုံးသမိုင်းမှာ နိုင်ငံအသင်းအတွက် ပွဲအများဆုံးကစားထားနိုင်သူအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်း ခေါင်းဆောင်ရဲ့ ပင်နယ်တီကန်ချက် ၂ ခုကတော့ ဆွစ်ဇာလန်ဂိုးသမား ယန်ဆွမ်မာကို မကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီပွဲမှာ တစ်ဖက် ၁ ဂိုးစီ သရေကျခဲ့တာပါ။ ရီမိုဖလူရာက ဆွစ်ဇာလန်အသင်းအတွက် ဦးဆောင်ဂိုးကို ၂၆ မိနစ်မှာသွင်းယူပေးခဲ့ပြီး စပိန်အသင်းအတွက် ဂျရတ်မော်ရီနိုက ၈၉ မိနစ်မှာ ချေပဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ ရာမို့စ်ဟာ ၂၃ မိနစ်အတွင်း ပင်နယ်တီ ၂ လုံးလွဲချော်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီမတိုင်ခင် ကလပ်အသင်းနဲ့ နိုင်ငံအသင်းအတွက် ပင်နယ်တီ ၂၅ လုံးဆက်တိုက် ဝင်အောင်ကန်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစံချိန်ကောင်းတွေကြောင့် ရာမို့စ်ဟာ စပိန်အသင်းအတွက် ပင်နယ်တီ ကန်သွင်းသူအဖြစ်ကနေ ဖယ်ရှားခံရမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ နည်းပြ အင်းနရစ်က ပြောပါတယ်။ “ရာမို့စ်ရဲ့ ပင်နယ်တီမှတ်တမ်းတွေက တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တစ်လုံး၊ နှစ်လုံးလောက် လွဲတာနဲ့ သူ့ကို ပင်နယ်တီကန်သွင်းသူအဖြစ်ကနေ ဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာ မတရားတာပါပဲ။ ကျနော်တို့အသင်းမှာ ပင်နယ်တီကန်နိုင်တဲ့သူမျ ားစွာရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ရာမို့စ်က ထိပ်ဆုံးမှာရှိနေပါတယ်။” ပင်နယ်တီလွဲခဲ့ပေမယ့် ရာမို့စ်ဟာ မွေးရာပါ အနိုင်ရရှိသူဖြစ်တယ်လို့လည်း ဂျာရတ်မော်ရီနိုက ပြောပါတယ်။ “ရာမို့စ်က မွေးရာပါ အောင်နိုင်သူပါ။ ဒီနေ့မှာ သူဟာ ပင်နယ်တီ ၂ လုံးလွဲခဲ့ပေမယ့် သူဟာ အနိုင်၊ အရှုံးများစွာကို ရင်ဆိုင်ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံရင့် ကစားသမားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။” စနေနေ့ သရေရလာဒ်ကြောင့် စပိန်အသင်းဟာ UEFA Nations League လိဂ် A ရဲ့အုပ်စု ၄ မှ ဂျာမနီ အသင်းရဲ့နောက် ၁ မှတ်အကွာနဲ့ အဆင့် ၂ နေရာကို ရောက်ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ဂန္ထဝင်ကစားသမား ရွိုင်ယန်ဂစ် ဖမ်းဆီးခံရ
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ ဂန္ထဝင်ကစားသမားလည်းဖြစ်၊ လက်ရှိ ဝေလလက်ရွေးစင်အသင်းနည်းပြလည်းဖြစ်တဲ့ ရွိုင်ယန်ဂစ်ဟာ နာကျင်စေမှု၊ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်မှု စတာတွေအတွက် သံသယရှိမှုနဲ့ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး ဂရိတ်မန်ချက်စတာမှာရှိတဲ့ ပန်ဒလီတန်ရဲစခန်းကို ခေါ်ခံရပါတယ်။ စွပ်စွဲခံထားရသလို တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမရှိဘူးလို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးနောက်မှာ နည်းပြ ရွိုင်ယန်ဂစ်က ငြင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့ညပိုင်း ဆဲလ်ဖို့ဒ်မှာရှိတဲ့ ဝေါ့စလေအရပ်က နေအိမ်တစ်အိမ်မှာ ဆူပူမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းပေးမှု ရရှိခဲ့ပြီးနောက် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး သူ့ကို တနင်္လာနေ့မှာ အာမခံနဲ့ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့က အတည်ပြုပါတယ်။ “ဆူပှုမှုအကြောင်း သတင်းပေးတာကို တနင်္ဂနွေနေ့ ည ၁၀ နာရီ ၅ မိနစ်မှာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၃၀ ကျာ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှာ ဆေးကုသမှုမလိုအပ်တဲ့ အသေးစားဒဏ်ရာတွေ ရရှိခဲ့ပြီး အသက် ၄၆ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးကို သံယသရှိမှုနဲ့ ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်” လို့ ဂရိတ်မန်ချက်စတာ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဂစ်ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကတော့ ကစားသမားဟောင်းဘက်က သူ့အပေါ် စွပ်စွဲထားချက်တွေ အားလုံးကို ငြင်းဆန်ထားတယ်လို့ ပြောပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့က လုပ်ဆောင်နေတဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေမှာလည်း အပြည့်အဝ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဝေလအသင်းနည်းပြဂစ်ဟာ UEFA Nations League ပွဲစဉ်အဖြစ် အိုင်ယာလန်၊ ဖင်လန်တို့နဲ့ ကစားမယ့် ဝေလအသင်း လူစာရင်းကို အခုသီတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာ ထုတ်ပြန်ဖို့ စီစဉ်ထားတာပါ။ အခုအခြေအနေကြောင့် အင်္ဂါနေ့မှာထုတ်ပြန်မယ့် လူစာရင်းကို ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပြီလို့ ဝေလဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်က ပြောပါတယ်။ ဝေလအသင်းဟာ အခုလအတွင်း UEFA Nations League ပွဲအပြင် အမေရိကန်အသင်းနဲ့ ကစားဖို့ရှိနေပြီး ဂစ်အနေနဲ့ ဒီ ၃ ပွဲစလုံးကို တာဝန်ယူနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့လည်း အဖွဲ့ချုပ်က အတည်ပြုပါတယ်။
ဘာစီလိုနာနှင့်ပွဲ လွဲခဲ့သဖြင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စစ်ဆေးမှုရလဒ်ကို ရော်နယ်ဒို အပြင်းအထန်ဝေဖန်
ကျန်းမာရေးကောင်းပြီး ကြံ့ခိုက်မှုပြည့်ဝနေကြောင်း ဂျူဗင်တပ်စ်တိုက်စစ်မှူး ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုက ပြောကြားလိုက်ပြီး ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲကို လွဲချော်စေခဲ့တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဆေးစစ်မှုရလဒ်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်အုပ်စုပွဲစဉ်တွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ချိန်မှာ ဘာစီလိုနာနဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းတို့ဟာ တစ်အုပ်စုတည်း ကျရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကြောင့် ဘောလုံးပရိသတ်တွေဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကစားသမား ၂ ဦးဖြစ်တဲ့ ရော်နယ်ဒိုနဲ့ မက်ဆီတို့ရဲ့အားပြိုင်မှုကို မြင်တွေ့ရဖို့ စိတ်အားထက်သန်ခဲ့ပေမယ့် သူတို့ ၂ ဦးအားပြိုင်မှုကို မြင်တွေ့ရဖို့ ဒီဇင်ဘာလအထိ ထပ်မံစောင့် ဆိုင်းရတော့ပါမယ်။ ရော်နယ်ဒိုဟာ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက် နိုင်ငံအသင်းနဲ့အတူရှိနေစဉ်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံခဲ့ရတာကြောင့် ပေါ်တူဂီအသင်းလူစာရင်းကနေ နုတ်ထွက်ကာ သီးသန့်ခွဲခြားနေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ကစားသမားက သူ့မှာ ရောဂါလက္ခဏာပြသခြင်းမရှိဘဲ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေကြောင်း ပြောပေမယ့် ဆေးစစ်ချက်တွေအရ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဆက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ ဘာကာနဲပွဲမတိုင်ခင် တရက်အလိုမှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ ဆေးစစ်မှုမှာလည်း သူဟာ positive ရလဒ်သာ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ UEFA ရဲ့ စည်းမျဉ်းတွေအရ ရောဂါလက္ခဏာပြသခြင်းမရှိပေမဲ့ ရော်နယ်ဒိုဟာ ပွဲမှာ ပါဝင်ခွင့်ရှိမှာမဟုတ်တာကြောင့် ကစားသမားက ဒီအခြေအနေကို စိတ်ပျက်နေပါတယ်။ သူဟာ ဂျူဗင်တပ်စ်-ဘာစီလိုနာပွဲမတိုင်ခင်မှာ အင်စတာဂရမ်ကို ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတင်ခဲ့ပြီး “ကျန်းမာရေး ကောင်းပါတယ်။ နေလို့ထိုင်လို့ အဆင်ပြေနေပါတယ်” လို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာပဲ PCR is bullsh*t လို့ရေးသားဟာ ကော်ရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရှိမရှိစစ်ဆေးတဲ့ နည်းစနစ်ကို အပြင်းအထန် ဖေဖန်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။‌ေ ရော်နယ်ဒိုက သူဟာ ပေါ်တူဂီအသင်းနဲ့အတူရှိနေစဉ်မှာလည်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကာ လက်ရှိအချိန်အထိ ဘယ်ကနေဘယ်လို ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံခဲ့ရသလိုဆိုတာကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ရော်နယ်ဒိုမပါဝင်တဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဟာ အိမ်ကွင်းမှာ ဘာစီလိုနာအသင်းကို ၂ ဂိုးပြတ်နဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်။ ရော်နယ်ဒိုရဲ့ ပေါက်ကွဲမှုမတိုင်ခင် သူ့ရဲ့အစ်မဖြစ်သူ ကာတီးယားအေဗီရိုကလည်း ရော်နယ်ဒို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတဲ့ အခြေအနေဟာ လုပ်ကြံဖန်တီးမှုတွေ ရှိနိုင်တယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။
စပိန်အသင်း ယူကရိန်းကို (၁-၀) ဂိုးဖြင့် ရှုံးနိမ့်၊ ဂျာမနီနှင့် ဆွစ်ဇာလန် ၃ ဂိုးစီသရေကျ
မနေ့ညက ကိဗ်မြို့မှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ UEFA နေးရှင်းလိဂ် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အုပ်စုပွဲစဉ်မှာ စပိန်အသင်းဟာ အိမ်ရှင် ယူကရိန်းအသင်းကို ၁ ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။ စပိန်အသင်းဟာ ၂ နှစ်‌နီးပါး ကာလအတွင်း ပထမဆုံး ရှုံးပွဲနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး ဒီပွဲမှာ စပိန်အသင်းဟာ ရရှိလာတဲ့ ဂိုးသွင်းခွင့်တွေကို လွဲချော်ခဲ့တာ မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ လိဒ်တိုက်စစ်မှူး ရိုဒရီဂိုဟာ စပိန်အသင်းအတွက် ဦးဆောင်ဂိုးရရှိစေမယ့် အပိုင်ခေါင်းတိုက်ခွင့် ၂ ကြိမ်ရရှိခဲ့ပေမယ့် ဂိုးရအောင် အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒီပွဲမှာ ယူကရိန်းဂိုးသမား ဂျီယော်ဂျီ ဘွတ်ချ်ချန်ကအကောင်းဆုံးလက်စွမ်းပြနိုင်ခဲ့ပြီး စပိန်အသင်းကတော့ ၂၀၁၂ ယူရိုဖလားရရှိခဲ့တဲ့ ကွင်းထဲမှာ ရှုံးနိမ့်မှုနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ စပိန်အသင်းဟာ ကန်သွင်းခွင့် ၂၁ ကြိမ်အထိ ရရှိခဲ့ပေမယ့် ဂိုးအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘဲ ယူကရိန်းအသင်းကတော့ ပထမဆုံးရရှိခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးကို ဂိုးအဖြစ် ပြောင်းလဲပြီး အနိုင် ၃ မှတ် ရရှိသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝက်စ်ဟမ်းတိုက်စစ်မှူး ယာမိုလန်ကိုရဲ့ ပေးပို့မှုကနေ လူစားဝင်ကစားသမား ဗစ်တာဆီဂန်ကော့ဗ်က အဆုံးသတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယူကရိန်းအသင်းဟာ တန်ပြန်တိုက်စစ်ကနေ ဒီဂိုးကို သွင်းယူခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဂိုးသွင်းခဲ့တာအနေအထား စပိန်ဂိုးသမား ဒီဟေးယားဟာလည်း နေရာယူပုံ လိုအပ်ချက်ရှိနေတာကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ပွဲအပြီးမှာတော့ ပေးဂိုးအတွက် ဒီဟေးယားကိုပဲ အပြစ်တင်လို့မရကြောင်း စပိန်နည်းပြအင်းနရစ်က ပြောလိုက်ပြီး ပေးလိုက်ရတဲ့ဂိုးတိုင်းအတွက် တသင်းလုံးမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ ၂၀၁၈ နိုဝင်ဘာလက ခရိုအေးရှားအသင်းကို ၃ ဂိုး ၂ ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း စပိန်အသင်းအတွက် ပထမဆုံး ရှုံးပွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရှုံးပွဲကြောင့် စပိန်အသင်းဟာ UEFA နေးရှင်းလိဂ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ အုပ်စု A4 ရဲ့ပထမနေရာမှာဆက် ရှိနေခဲ့ပေမယ့် ဒုတိယနဲ့ တတိယနေရာက ဂျာမနီ၊ ယူကရိန်းတို့နဲ့ အမှတ်ကွာဟချက် ၁ မှတ်သာ ရှိတော့ပါတယ်။ အုပ်စုတွင်း တခြားပွဲစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဂျာမနီနဲ့ ဆွစ်ဇာလန်အသင်းတို့ပွဲမှတော့ တစ်ဖက်ကို ၃ ဂိုးစီနဲ့သရေကျခဲ့ပါတယ်။ ကိဗ်မြို့မှာ ကစားခဲ့တဲ့ပွဲကို ပရိသတ် ၁၅၀၀၀ နီးပါး လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး အများစုကတော့ စပိန်ပရိသတ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
လီဗာပူးအသင်းမှ မထွက်ခွာဖြစ်သည့်အပေါ် တိုက်စစ်မှူး ရှာကွီရီ ရှင်းလင်း
လီဗာပူးအသင်းမှာ ဆက်နေသွားဖို့ ကိုယ်တိုင်ပဲ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ တိုက်စစ်မှူး ဇန်ဒန်ရှာကွီရီ ထုတ်ဖော်ပြောပါတယ်။ ရှာကွီရီဟာ ရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာ လီဗာပူးအသင်းကနေ ထွက်ခွာဖို့ တော်တော်လေး သတင်းကြီးခဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ကာလ ပြီးဆုံးသွားချိန်အထိ အသင်းပြောင်းခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် ကစားသမားကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အသင်းတွေ အများကြီးရှိခဲ့ပြီး လီဗာပူးအသင်းမှာ ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက် အာမခံချက်မရှိတဲ့ အခြေအနေမှာ အသင်းမှာပဲ ဆက်နေဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေကို ပရိသတ်တွေက သိချင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကစားသမားဘက်ကတော့ အသင်းပြောင်းခွင့်မရရှိခဲ့ခြင်းအတွက် ပြဿနာမရှိကြောင်း ပြောခဲ့ပြီး ကလပ်အသင်းအတွက် ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံအသင်းအတွက်ဖြစ်စေ အခွင့်အရေးရရင် ရသလို ပေးဆပ်သွားဖို့ အာရုံစိုက်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ရှာကွီရီဟာ မကြာသေးခင်က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံခဲ့ရပြီး ရောဂါကနေ ပြန်လည်သက်သာလာတာကြောင့် ဂျာမနီနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ဆွစ်ဇာလန်အသင်းရဲ့ UEFA Nations League ပွဲစဉ်အတွက် လူစာရင်းမှာ ပါဝင်လာခဲ့ပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲစဉ်မတိုင်ခင် သတင်းသမားတွေနဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာ ရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာ အသင်းမပြောင်းခဲ့ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးမြန်းခဲ့ကြပြီး ကစားသမားကတော့ ဂျာမနီလို အသင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရဖို့ ပြင်ဆင်နေချိန်မှာ ကလပ်အသင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အပြောင်းအရွှေ့အကြောင်းတွေကို မပြောသင့်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ “ကျနော်တို့ ဂျာမနီအသင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ကျနော့်အနေနဲ့ ဒီပွဲအကြောင်းပဲ ပိုဖြေချင်ပါတယ်။ ဘောလုံးလောကမှာ ခန့်မှန်းမှုတွေနဲ့ ကစားသမားတွေရဲ့ အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ တွက်ဆမှုတွေဟာ အမြဲတမ်း ရှိနေပါတယ်။ ဒါဟာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပါပဲ။ ကျနော်လည်း အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ စဉ်းစားမှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဒီအသင်းမှာပဲ ဆက်နေဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်”လို့ ဆွစ်ဇာလန်လက်ရွေးစင် တိုက်စစ်မှူးက ပြောပါတယ်။ ရှာကွီရီဟာ လီဗာပူးအသင်းကို စတုတ်စီးတီးအသင်းကနေ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သူဖြစ်ပြီး အသင်းအတွက် ၄၂ ပွဲ ကစားပေးထားပါတယ်။
မေဆင်မောင့်ထ်ကို ဒီဘရိုင်းကဲ့သို့ ကစားသမားကောင်း ဖြစ်လာနိုင်ဟု သုံးသပ်
ချဲလ်ဆီးကွင်းလယ်လူ မေဆင်မောင့်ထ်ဟာ ကယ်ဗင်ဒီဘရိုင်းလို ကစားသမားကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်ဟောင်း ဂျင်မီရက်နက်က သုံးသပ်လိုက်ပါတယ်။ အင်္ဂလန်နဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံတို့ရဲ့ UEFA Nations League ပြိုင်ပွဲအပြီးမှာ အခုလို ပြောဆိုလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့ပွဲမှာ အင်္ဂလန်အသင်းက ၂ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းက ဦးဆောင်ဂိုးရရှိခဲ့တာပါ။ ဒိုင်ယာရဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်ကနေ ရရှိလာတဲ့ ပင်နယ်တီကို တိုက်စစ်မှူး လူကာကူက အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးနီးပါးမှာ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းကသာ ပွဲကို စိုးမိုးခဲ့တာဖြစ်ပြီး အင်္ဂလန်အတွက် ချေပဂိုးကို ရက်ဖို့ဒ်က ပင်နယ်တီကနေတဆင့် သွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ အင်္ဂလန်အသင်းအတွက် အနိုင်ဂိုးကို မေဆင်မောင့်ထ်က သွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဘယ်လ်ဂျီယံ နောက်ခံလူ အယ်လ်ဒါဝီရယ်နဲ့ ထိပြီး ဝင်သွင်းခဲ့တဲ့ သူ့ကန်ချက်ကြောင့် အင်္ဂလန်အသင်းဟာ အုပ်စုအဆင့် ၁ နေရာကို ရောက်ရှိခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မောင့်ထ်ဟာ ဒီပွဲရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုလည်း ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပြီး ဒီဘရိုင်းကတော့ ဒီပွဲမှာ ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်း တိုက်စစ်အတွက် အသက်သွေးကြောကစားသမားအဖြစ် ခြေစွမ်းပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင် ကစားသမားဟောင်း ဂျင်မီရက်နက်က မေဆင်မောင့်ထ်မှာလည်း ဒီဘရိုင်းလို ဖြစ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်တွေ ရှိနေပြီး ဒီဘရိုင်းလို ကမ္ဘာ့အဆင့်ကစားသမား ဖြစ်လိုတယ်ဆိုရင် ပိုပြီးတော့စည်းစနစ်ကျတဲ့ပုံစံနဲ့ ကစားပွဲကို ချဉ်းကပ်သင့်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ “ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းမှာ ဒီဘရိုင်းလို အရမ်းကောင်းတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦး ရှိနေပါတယ်။ သူဟာ ဒီပွဲမှာ ဘာကြောင့် ဒီဘရိုင်းလို့ နာမည်ကြီးရတယ်ဆိုတဲ့ ပေးပို့မှုတွေကို ပြုလုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မေဆင့်မောင့်ထ်အကြောင်း ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ သူ့အနေနဲ့ အခုထက်ပိုပြီး ကြိုးစားသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီဘရိုင်းကို ကြည့်ရင် သူဟာ သုံးယောက်တန်းမှာ ကစားနေပေမယ့် ဘောလုံးကို လိုက်လု၊ လိုက်ယူနေတာကို တွေ့ရပါမယ်။ ဘောလုံးရှိနေတဲ့ နေရာကို သူက အမြဲတမ်းသွားနေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ မေဆင်မောင့်ထ်ဟာ အင်္ဂလန်အသင်းအတွက် ဒီလိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ကစားသမား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ညာဘက်မှာပဲ နေနေလို့တော့ မရပါဘူး။ ပိုပြီးတော့ အတွင်းထဲကို ဝင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။” သွင်းဂိုးရရှိတဲ့ အနေအထားမှာလည်း ကံကောင်းခဲ့ပေမယ့် သူ့အတွက် ထိုက်တန်ခဲ့ပါတယ်လို့လည်း ရက်နက်က မေဆင်မောင့်ထ်ရဲ့ သွင်းဂိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောပါတယ်။
ပရိသတ်များ ကွင်းထဲဝင်ကြည့်ရှုခွင့်ပြုရန် ပရီးမီးယားလိဂ်အဖွဲ့ချုပ် တောင်းဆို
ပရိသတ်တွေကွင်းထဲ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ကို တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ပရီးမီးယားလိဂ်အဖွဲ့ချုပ်က ဗြိတိန်အစိုးရထံ အိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စောင် ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပေးစာကို အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (EFL)၊ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (FA)၊ အမျိုးသမီး FA တို့က ကိုယ်စားလှယ်တွေက လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး စမ်းသပ်မှုရလဒ်တွေမှာ ပရိသတ်တွေကို အရေအတွက်ကန့်သတ်ပြီး ဘေးကင်းစွာနဲ့ ကွင်းထဲဝင်ရောက် ကြည့်ရှုဖို့ အဆင်ပြေကြောင်း တွေ့ခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပြန့်ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ အစိုးရရဲ့ ကန့်သတ်မှု အသစ်တွေဟာ နောက်ထပ် ၆ လအထိ ကြာမြင့်နိုင်တယ်လို့ ဝန်ကြီးချုပ်ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်က ပြီးခဲ့တဲ့လမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့မှာ ပရိသတ်တွေ ကွင်းထဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ပြုဖို့ အစီအစဉ်တွေဟာလည်း ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ ဂျာမနီ အပါအဝင် ဥရောပနိုင်ငံတချို့မှာ ပရိသတ်တွေကို အရေအတွက် ကန့်သတ်ချက်နဲ့ ကွင်းထဲကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုထားပြီဖြစ်ပြီး UEFA က ကျင်းပတဲ့ ကလပ်အသင်းပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာပွဲတွေမှာလည်း ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ ဗြိတိန်မှာတော့ ဒီလိုခွင့်ပြုထားခြင်းမျိုး မရှိပေမယ့် စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် ၁၁ ပွဲရဲ့ ရလဒ်အရ ပရိသတ်တွေကို ကွင်းထဲကို ပြန်ဝင်ခွင့်ပြုဖို့ အဆင်ပြေနေပြီလို့ အစိုးရထံ ပေးပို့ခဲ့တဲ့စာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ “EFL၊ ပရီးမီးယားလိဂ်၊ အမျိုးသမီးစူပါလိဂ်နဲ့ အမျိုးသမီး ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲတွေက ပွဲစဉ် ၁၁ ခုမှာ ပရိသတ်တွေကို ကွင်းထဲ အန္တရာယ်ကင်းစွာ ပြန်ဝင်ခွင့်ပြုနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကို ကွင်းထဲ မြန်မြန်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုလေ ဒေသတွင်း အလုပ်အကိုင်၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ စီးပွားရေးနဲ့ နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးတို့အတွက် ပိုပြီးအကျိုးရှိလေ ဖြစ်လိမ့်မယ်” လို့လည်း ဒီစာမှာ ရေးသားထားပါတယ်။ အနုပညာနဲ့ ဂီတပွဲတော်တွေမှာ ပရိသတ်တွေကို ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုခဲ့ရာ ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေကို ရရှိခဲ့တာကြောင့် ဘောလုံးအားကစားမှာလည်း ဒီလိုခွင့်ပြုပေးစေဖို့ တိုက်တွန်းကြောင်းလည်း ရေးသားထားပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်ကနေ အစိုးရထံ တင်ပြခဲ့တဲ့စာမှာ ပရိသတ်တွေ ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် ကလပ်အသင်းတွေဘက်က လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေကိုလည်း အသားပေး ရေးသား ဖော်ပြထားပါတယ်။
“ကစားသမားတွေဟာ စက်တွေ မဟုတ်ပါဘူး” ဂွါဒီယို
ကစားသမားတွေရဲ့အခြေအနေကို ဘယ်သူမှ ဂရုမစိုက်ကြကြောင်း နီးကပ်လွန်းတဲ့ ပွဲစဉ် ဇယားအခြေအနေကို မန်စီတီးနည်းပြ ပက်ဂွါဒီယိုလာက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်သွားခဲ့ပါတယ်။ မန်စီတီးအသင်းဟာ ရာသီကြိုပြင်ဆင်ချိန်ကာလ အနည်းငယ်သာရရှိခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲတွေ ပြန်လည်ယှဉ်ပြိုင်နေချိန်မှာ သူတို့အတွက် ဒေါင်ဒေါင်မြည်ကစားသမား ၁၃ ဦးသာ ကျန်တော့ တယ်လို့ ဂွါဒီယိုလာက ဘုန်းမောက်နဲ့ ကာရာဘောင်ပွဲအပြီးမှာ ပြောပါတယ်။ မန်စီတီးအသင်းရဲ့ အဓိကတိုက်စစ်မှူး နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အဂွဲရိုနဲ့ ဂျေးဆုတို့ဟာ ဒဏ်ရာကြောင့် အနားယူနေရပြီး ကွင်းလယ်လူ ဘာနာဒိုဆေးလ်ဗား၊ နောက်ခံလူ ကန်ဆယ်လိုနဲ့ ဇင်ချန်ကိုတို့ဟာ ကြံ့ခိုင်ရေးပြဿနာ ရှိနေပါတယ်။ လာပေါ့ထ်နဲ့ဂွန်ဒိုဝမ်တို့ဟာလည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကြောင့် အခုချိန်ထိ မကစားနိုင် ‌သေးပါဘူး။ မန်စီတီးအသင်းဟာ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာ လက်စတာအသင်းနဲ့ ကစားရမှာ ဖြစ်ပြီး အားလုံးအတွက် ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာ ကစားသမားတွေဟာ များပြားတဲ့တောင်းဆိုမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ ဂွါဒီယိုလာက ပြောပါတယ်။ “အခြေအနေအမှန်ကတော့ မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ဒါဟာ မန်စီတီးတစ်သင်းတည်းရဲ့ ပြဿနာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကလပ်အသင်းတိုင်း၊ နိုင်ငံအသင်းတိုင်းရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ ဘယ်သူ တစ်ယောက်ကမှ ကစားသမားတွေရဲ့အခြေအနေကို ထည့်မတွက်ကြပါဘူး။ ပရီးမီးယားလိဂ်၊ UEFA နဲ့ EFL အားလုံးက သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ သူတို့ရဲ့အတွက်ပဲ ကာကွယ်နေကြတာပါ။ ကစားသမားတွေက ရာသီကြို ၂ ပတ်ပဲရခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်တော့ ၁၁ လဆက်တိုက် ၃ ရက်ကို ၁ ပွဲကစားရပါတော့မယ်။ ဒီလိုမျိုးဆန့်ကျင်ဘက်တွေပြောနေလို့လည်း ကျနော်တို့ ဘာကိုမှ ပြောင်းလဲလို့မရဘူးဆိုတာသိပါတယ်။” “စားသောက်ဆိုင်၊ ပြဇာတ်ရုံ၊ ရုပ်ရှင်ရုံနဲ့ ပြတိုက်တွေနဲ့အားလုံးအတွက် ဒါဟာခက်ခဲတဲ့ အခြေအေ န ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်။ အားလုံးဟာ ရုန်းကန်နေရပါတယ်။ ကျနော်တို့ဟာ လည်း အခွင့်ထူးခံတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ လုပ်နေတဲ့ အရာပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုရှိပြီးတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရပါမယ်။ ကျနော်တို့မှာ နိုင်ငံအသင်းကနေ ဒဏ်ရာနဲ့ ပြန်လာတဲ့က စားသမား ၃ ယောက်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာထိန်းချုပ်လို့ မရပါဘူး။ သူတို့ကကစားသမားတွေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲ ၄ ရက်အတွင်း ၂ပွဲကစားခိုင်းပါတယ်။ ကစားသမားတွေဟာ စက်တွေ မဟုတ်ပါဘူး” လို့လည်း ဂွါဒီယိုလာကပြောပါတယ်။ မန်စီတီးအသင်းဟာ လက်စတာနဲ့ပွဲပြီးရင် EFL ပွဲအဖြစ် ဘန်လေအသင်းနဲ့ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့မှာကစားကာ လိဒ်နဲ့ အောက်တိုဘာ ၃ ရက် စနေနေ့မှာ ထပ်မံ ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
စပိန်ဂန္ထဝင်ဂိုးသမားကြီး ကာဆီးလက်စ် ကစားသမားဘဝမှ အနားယူ
စပိန် ဂန္ထဝင် ဂိုးသမားကြီး အီကာကာဆီးလက်စ်က ၂၂ နှစ်ကြာ ကစားသမားဘဝကနေ အနားယူလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ အသက် ၃၉ နှစ်အရွယ်မှာ ကစားသမားဘဝကို အဆုံးသတ်လိုက်တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားပိုင်ရှင် ကာဆီးလက်စ်ဟာ ၂၀၁၉ မှာ ပြင်းထန်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာနဲ့ ရင်ဆိုင်ရပြီးချိန်ကတည်းက ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့သူပါ။ သူဟာ နှလုံးရောဂါကနေ ပြန်လည်သက်သာလာခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘောလုံးရာသီအတွက် ပေါ်တိုအသင်းရဲ့ လူစာရင်းမှာ ထည့်သွင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ အနားယူတော့မယ့်အကြောင်းကို ကာဆီးလက်စ်က “အရေးကြီးဆုံးအရာက ခင်ဗျားသွားတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ ခင်ဗျားဘေးက လူတွေပါ။ ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်း ရောက်သွားတဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော့်အနေနဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောနိုင်တာကတော့ ဒါဟာ မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ရတဲ့ အဆုံးသတ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” လို့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာ ရေးပါတယ်။ စပိန် ဂိုးသမားကြီးဟာ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းမှာ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းက ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ ၇၂၅ ပွဲ ကစားခဲ့ကာ လာလီဂါဖလား ၅ လုံးနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ၃ လုံး ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ စပိန်အသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ်နဲ့ ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၈ နဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွေမှာလည်း ဥရောပဖလားကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ရီးရဲလ်အသင်းကနေ ပေါ်တိုအသင်းကို ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပြီး ပေါ်တူဂီအသင်းအတွက် ၁၅၆ ပွဲ ကစားခဲ့ကာ ဖလား ၂ လုံး ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကစားသမားဘဝက အနားယူခဲ့ပေမယ့် ကာဆီးလက်စ်ကို အားကစားနယ်ပယ်ထဲမှာပဲ ဆက်လက်မြင်တွေ့ရဖွယ်ရှိနေပြီး သူဟာ စပိန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (RFEF) ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်း ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်‌။ ကာဆီးလက်စ် အနားယူသွားခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းက သူတို့ရဲ့ တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကနေတဆင့် ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ကာဆီးလက်စ်ဟာ ရီးရဲလ်အသင်းနဲ့အတူ လာလီဂါဖလား၊ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားတွေအပြင် Super de Espanan ဖလား ၄ ကြိမ်၊ UEFA စူပါဖလား ၂ ကြိမ်၊ ကမ္ဘာ့ကလပ်များဖလား ၁ ကြိမ်တို့ကိုပါ ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းလိုက် ဆုဖလားတွေအပြင် ကာဆီးလက်စ်ဟာ လာလီဂါရဲ့အကောင်းဆုံး ဂိုးသမားဆုကို ၂ ကြိမ်ရရှိခဲ့ပြီး FIFA FIFAPro ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကစားသမား ၁၁ ဦး စာရင်းမှာလည်း ၅ ကြိမ် ပါဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာ့ဖလားရွှေလက်အိတ်ဆုကို ရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ Primeira Liga အကောင်းဆုံး ဂိုးသမားဆိုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ စပိန်အသင်းနဲ့အတူ ကမ္ဘာ့ဖလား ၄ ကြိမ် ပါဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး အသင်းရဲ့သမိုင်းတလျှောက် ဒုတိယမြောက် ပွဲအများဆုံးကစားထားသူ ဖြစ်ကာ ချန်ပီယံလိဂ်သမိုင်းတ‌လျှောက် ပွဲအများဆုံးကစားထားသူ၊ clean sheet အများဆုံး ရရှိထားသူနဲ့ ပင်နယ်တီကာကွယ်မှု အများဆုံး ပြုလုပ်ထားသူဆိုတဲ့ မှတ်တမ်းကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
လီဗာပူးကွင်းလယ်လူ လယ်လာနာ ဘရိုက်တန်သို့ ပြောင်းဖွယ်ရှိ
လီဗာပူးအသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မယ့် ကွင်းလယ်လူ လယ်လာနာဟာ ဘရိုက်တန်အသင်းကို ၃ နှစ်စာချုပ်နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ဖို့ သဘောတူညီမှုရရှိသွားခဲ့ပြီလို့ Goal သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ဒီအပြောင်းအရွေ့ကို လာမယ့်သီတင်းပတ်မှာ အတည်ပြုထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့လည်း သတင်းမှာ ရေးသားထားပါတယ်။ လယ်လာနာကို လက်စတာ၊ ဘန်လေနဲ့ အသင်းဟောင်း ဆောက်သမ်တန်တို့က ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပြီး နည်းစနစ်ဒါရိုက်တာ ဒန်အက်ရှ်ဝုဒ်ကြောင့် ဘရိုက်တန်အသင်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘရိုက်တန်အသင်းဟာ လက်ရှိပရီးမီးယားလိဂ်အမှတ်ပေးဇယားမှာအဆင့် ၁၆ နေရာမှာ ရပ်တည်နေပြီး ရာသီပိတ်ပွဲစဉ်ကိုလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ဘန်လေအသင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်သွားဖို့ရှိ ပါတယ်။ အသင်းဟာတန်းဆင်းဇုန်အန္တရာယ်ကနေ အပြည့်အဝလွတ်မြောက် သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး တနင်္ဂနွေနေ့ပွဲစဉ်မှာသာ ရလဒ်ကောင်းရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် အမှတ်ပေးဇယားရဲ့ အဆင့် ၁၅ နေရာအထိ ရောက်ရှိဖို့အခွင့်အရေးရှိနေပါတယ်။ အသက် ၃၂ နှစ်ရွယ်လယ်လာနာဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာဆောက်သမ်တန်အသင်းကနေ လီဗာပူး အသင်းကိုရောက်ရှိခဲ့သူဖြစ်ပြီး ခြောက်ရာသီအတွင်းအသင်းအတွက် ၁၇၈ ပွဲပါဝင်ကစားခဲ့ ပါတယ်။ အင်္ဂလန် ကွင်းလယ်လူဟာ ၂၀၁၅-၁၆ ဘောလုံးရာသီမှာ ယူရိုပါလိဂ်နဲ့ လိဂ်ဖလားဗိုလ်လုပွဲ ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ လီဗာပူးလူစာရင်းမှာပါဝင်ခဲ့ပေမယ့် သူ့ရဲ့လီဗာပူးကစားသမားဘဝ ပထမဆုံး ဆုဖလားကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲမှာမှ ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သူဟာ လီဗာပူးအသင်းနဲ့အတူပရီးမီးယားလိဂ်၊UEFA စူပါဖလား၊ကမ္ဘာ့ကလပ်အ သင်းများဖလားတို့ကိုလည်း ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ လယ်လာနာဟာ အင်္ဂလန်ကစားသမားတွေထဲမှာမှ ထူးခြားတဲ့ ဘောလုံးစွမ်းရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပြီးတော့ သူဟာလီဗာပူးလ်နည်းပြယာဂန်ကလော့နှစ်သက်တဲ့ကစားသမားတွေ ထဲ က တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကလော့ကသူ့ကိုအသင်းရဲ့ဂန္တဝင်တစ်ဦးလို့လည်း မကြာသေးခင်က တင်စားခေါ်ဝေါ်ခဲ့ ပါတယ်။ ၆နှစ်ကြာ ကျင်လည်ခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေစွန့်ခွာရတော့မယ့်အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိ တယ်လို့ လယ်လာနာက သူ့ရဲ့နှုတ်ဆက်စကားမှာ ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပေမယ့် ရှေ့မှာ စောင့်ကြိုနေ တဲ့ စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်အတွက် မန်စီးတီးအသင်းကို ပြန်တောင်းပန်ရန် ဂွါဒီယိုလာ တောင်းဆို
ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့် ပိတ်ပင်ခံရတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကနေ ပြန်လည်လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီးနောက် မန်စီးတီးအသင်းကို ပြန်တောင်းပန်ဖို့ နည်းပြ ပက်ဂွါဒီယိုလာက တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ အယူခံအောင်မြင်မှုကြောင့် မန်စီးတီးအသင်းအပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ ဥရောပလိဂ်ပြိုင်ပွဲ ၂ နှစ် ပိတ်ပင်ထားခြင်းကို အားကစားဆိုင်ရာ သမာဓိခုံရုံးက တနင်္လာနေ့မှာ ပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေးအရမျှတစွာ ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း FPP နဲ့ အသင်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းတွေကို ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ မန်စီးတီးအသင်းကို UEFA ရဲ့ ကလပ်အသင်းဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးထိန်းချုပ်မှုအဖွဲ့ CFCB က ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပြီးနောက် မန်စီးတီအသင်းဘက်က အယူခံသွင်းမယ်လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အယူခံအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ CAS က သူတို့ရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကို ဖယ်ရှားပေးခဲ့ကာ ဒဏ်ကြေးကိုလည်း ပေါင် ၉ သန်းနီးပါးအထိ လျှော့ချပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုသတင်းကောင်းမျိုးရှိခဲ့ပေမဲ့ ပြစ်ဒဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့ ၅ လနီးပါးလောက် ဖိအားရှိခဲ့တဲ့ နည်းပြဂွါဒီယိုလာကတော့ ဘုန်းမောက်နဲ့ပွဲမတိုင်ခင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ဒီကိစ္စအပေါ် မကျေလည်မှုကို ထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ ဂွါဒီယိုလာက “ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် ဝမ်းသာမိပါတယ်။ ဒါဟာ အသင်းအပေါ်လူတွေ ပြောခဲ့တဲ့အရာတွေက မှားယွင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ သက်သေပြချက်ပါ။ ကျနော်တို့ဟာ ကွင်းထဲမှာ ရရှိခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ကွင်းထဲမှာ ကာကွယ်သွားမှာပါ။ ကျနော်တို့ဘက်ကသာ မှားခဲ့ရင် ဒီအမှားကို လက်ခံသွားမှာ ဖြစ်တာကြောင့် တာဝန်ရှိသူတွေဟာ ကျနော်တို့အသင်းကို တောင်းပန်စကား ပြောဆိုသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကို တခြားအသင်းတွေက ကာကွယ်ပေးတာမျိုးကို မမျှော်လင့်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ဘက်ကသာ မဟုတ်တာ မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ယုံကြည်ရင် ကျနော်တို့ဘက်က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်သွားဖို့အခွင့်အရေး ရှိနေပါတယ်။ ကျနော်တို့အသင်းဟာ ဥရောပမှာရှိတဲ့ တခြားအသင်းတွေလိုမျိုးပဲ တူညီတဲ့စည်းမျဉ်းတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဘက်ကသာ FFP ကို ချိုးဖောက်တယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ပိတ်ပင်ခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ဘက်ကသာ မှန်တယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ခုခံကာကွယ်သွားရပါမယ်” လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မန်စီးတီးနည်းပြဟာ ပြစ်ဒဏ်ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်မှုအပေါ် ဝေဖန်ခဲ့တဲ့အပေါ် လာလီဂါဥက္ကဋ္ဌကိုလည်း ပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
မန်စီးတီး၏ ပြစ်ဒဏ်အခြေအနေအပေါ် လုံးဝ မျှော်လင့်ချက်မထားခဲ့ဟု လမ်းပတ် ပြော
မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်အယူခံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမျှော်လင့်ချက်မှ မထားရှိခဲ့ဘူးလို့ ချဲလ်ဆီးအသင်း နည်းပြ လမ်းပတ်က ပြောပါတယ်။ မန်စီးတီးအသင်းဟာ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ချိုးဖောက်ခဲ့တာကြောင့် UEFA ရဲ့ ဥရောပပြိုင်ပွဲ ဝင်ရောက်ခွင့် နှစ်နှစ် ပိတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီပြစ်ဒဏ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ အယူခံကို UEFA က တနင်္လာနေ့မှာ လက်ခံခဲ့တာကြောင့် မန်စီးတီးဟာ နောက်ရာသီချန်ပီလံလိဂ်ပြိုင်ပွဲ ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မန်စီးတီးအသင်းသာ ပြစ်ဒဏ်ကျခံရမယ်ဆိုရင် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ အဆင့် ၅ နေရာကို ရမယ့်အသင်းဟာ နောက်ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲ ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြစ်ဒဏ် ပယ်ဖျက်ခံလိုက်ရတာကြောင့် ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ အဆင့် ၁ ကနေ ၄ အထိ ၄ သင်းပဲ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရရှိတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချဲလ်ဆီးအသင်းဟာ လက်ရှိအမှတ်ပေးဇယားမှာ အဆင့် ၃ နေရာမှာ ရပ်တည်နေပြီး ဒီနေ့မနက် ယူနိုက်တက်-ဆောက်သမ်တန် အသင်းတို့ပွဲက သရေကျသွားလို့ ဒီနေရာကို ဖယ်မပေး ရသေးပါဘူး။ မန်စီးတီးအသင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ UEFA ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ လမ်းပတ်က “ကျနော် ဒီကိစ္စမှာ ဘယ်ဘက်ကမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ ဒီဖြစ်ရပ်အပေါ် သေသေချာချာ သိထားတာမျိုးလည်း မရှိပါဘူး။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျနော် ဘာမှ မျှော်လင့်ချက် မထားခဲ့ပါဘူး။ ကျနော်တို့ ကိုယ့်အခြေအနေကိုသာ ကိုယ်ကြည့်နေတာဖြစ်ပြီး လုံလောက်တဲ့ပွဲတွေကို အနိုင်ရမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ နောက်ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ကျနော်တို့ အဆင့် ၃ နေရာမှာ ရှိနေပါတယ်။ အရာအားလုံးဟာ ကျနော်တို့ပေါ်မှာပဲ မူတည်နေပါတယ်။ အပြင်အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုကြောင့် ကျနော့်ကစားသမားတွေ ကြိုးစားမှု လျော့သွားတာမျိုး မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ မန်စီးတီး ချန်ပီယံလိဂ်က ပိတ်ပင်ခံရသည် ဖြစ်စေ၊ မပိတ်ခံရသည် ဖြစ်စေ ကျနော်တို့သာ အနိုင်ရလဒ်တွေကို ဖော်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင် နောက်ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
ပရီးမီးယားလိဂ်နှင့် အံဝင်မည့်စားသမားဟု ပါတေးကို ထရစ်ပီးယား ချီးကျူး
အာဆင်နယ်အသင်းက ခေါ်ယူဖို့ ပစ်မှတ်ထားနေတဲ့ ကွင်းလယ်လူ သောမတ်စ်ပါတေး‌ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်နဲ် အံဝင်မယ့်ကစားသမား ဖြစ်တယ်လို့ အက်သလက်တီကိုအသင်းဖော် ကီရန်ထရစ်ပီးယားက ထုတ်ဖော် ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။ ပါတေးဟာ အက်သလက်တီကိုအသင်း အကယ်ဒမီကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ကစားသမား ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ အသင်းကြီးကို ရောက်ရှိခဲ့ကာ ဆီမြွန်နီရဲ့လူစာရင်းမှာ အရေးပါတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးအဖြစ် ခြေစွမ်းပြသထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ပါတေးဟာ အက်သလက်တီကိုအသင်းအတွက် ၁၇၉ ပွဲ ကစားပေးပြီး ၁၅ ဂိုး သွင်းယူထားကာ အသင်းနဲ့ ဥရောပဖလား၊ UEFA စူပါဖလားတို့ကိုလည်း ဆွတ်ခူးထားနိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုရာသီဟာ အက်သလက်တီကိုအတွက် ပါတေးရဲ့ အကောင်းဆုံးရာသီလို့ သတ်မှတ်နိုင်ပြီး သူဟာ လီဗာပူးအသင်းနဲ့ ၁၆ အသင်းအဆင့် ပွဲစဉ် နှစ်ပွဲလုံးမှာ အသင်းအတွက် အထူးခြေစွမ်းပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲစဉ်အပြီးမှာ သူ့ကို လီဗာပူးအသင်းက ခေါ်ယူတော့မယ်လို့ သတင်းတွေလည်း ထွက်ပေါ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်ရှိအခြေအနေတွေအရ ဂါနာ လက်ရွေးစင်အတွက် အသင်းသစ်ဟာ အာဆင်နယ်အသင်း ဖြစ်လာဖို့ များနေပါတယ်။ အာဆင်နယ်နည်းပြ အာတီတာဟာ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ လူစာရင်းကို ပြောင်းလဲမှုတချို့ ပြုလုပ်သွားဖို့ဆန္ဒရှိနေပြီး ပါတေးရဲ့ ပေါင် ၄၅ သန်းတန် စာချုပ်ဖျက်သိမ်းကြေးအတိုင်း ပေးချေသွားဖို့ စဉ်းစားနေတယ်လို့ သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်လူ ထရစ်ပီးယားက သူ့အသင်းဖော်နဲ့ပတ်သက်လို့ ပြောဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပါတေးကို အက်သလက်တီကိုမှာ ဆက်ရှိနေတာ မြင်ချင်ပေမယ့် သူ အသင်းပြောင်းသွားရင်လည်း ပရီးမီးယားလိဂ်ဟာ သူ့အတွက် အံဝင်ဖို့ မခက်ခဲဘူးလို့ သုံးသပ်ပါတယ်။ “သူက မယုံနိုင်လောက်အောင်ကိုကောင်းတဲ့ ကစားသမားပါ။ သူဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုရှိသလို တစ်ဖက်အသင်းရဲ့ ကစားကွက်ကို ဖျက်ဆီးပစ်တဲ့နေရာမှာလည်း ဆရာတစ်ဆူပါပဲ။ နည်းစနစ်ပိုင်းအရ သူဟာ အားလုံးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ သူဟာ ကျနော် တွဲကစားဖူးသမျှ အကောင်းဆုံးကွင်းလယ်ကစားသမားတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်သလို သူ့ရဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်လည်း ပရီးမီးယားလိဂ်ကို ပြောင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင် သူ့အတွက် ပြဿနာမရှိနိုင်ပါဘူး” လို့ ထရစ်ပီးယားက ပြောပါတယ်။
ချန်ပီယံလိဂ်နှင့်ယူရိုပါလိဂ် ကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်များ ပေါ်တူဂီနှင့် ဂျာမနီတွင် ကျင်းပမည်
ဥရောပချန်ပီယံလိဂ်နဲ့ ယူရိုပါလိဂ်ပွဲ ကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တွေကို ပေါ်တူဂီနဲ့ ဂျာမနီနိုင်ငံတွေမှာ တကျော့တည်း စနစ်နဲ့ အပြီးသတ်ကျင်းပမယ်လို့ UEFA က အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ် ကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တွေကို သြဂုတ် ၁၂ ရက်ကစတင်ပြီး ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ လစ္စဘွန်းမြို့မှာ တကျော့တည်း ကစားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၆ သင်းအဆင့် ဒုတိယအကျော့ လက်ကျန် ၄ ပွဲကိုတော့ မူလက စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း ကျင်းပမလား၊ ပေါ်တူဂီမှာပဲ ယှဉ်ပြိုင်စေမလားဆိုတာ မဆုံးဖြတ်ရေသေးဘဲ ဆက်ပြီး ဆွေးနွေးသွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ UEFA လက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး မာချက်တီက ပြောပါတယ်။ ယူရိုပါလိဂ်ပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်း ကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တွေကို သြဂုတ် ၁၀ ရက်ကနေ စတင်ပြီး ဂျာမနီက ကွင်း ၄ ကွင်းမှာ ကျင်းပမှာပါ။ ၁၆ သင်းအဆင့် ဒုတိယအကျော့ပွဲစဉ်တွေကို ဘယ်လိုကျင်းပမလဲ ဆိုတာကတော့ ဆက်ပြီး ဆွေးနွေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျင်းပမယ့် အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေရဲ့ သဘောတူညီမှု ရရှိထားပြီး ပရိသတ်တွေ ကွင်းထဲအထိ လာရောက်ကြည့်ခွင့်ရမလားဆိုတာကို ဇူလိုင်လအတွင်းမှာ ဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ UEFA ဥက္ကဋ္ဌ ဆက်ဖာရင်က ပြောပါတယ်။
ချန်ပီယံလိဂ် ကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်များ တကျော့တည်းစနစ်ဖြင့် ပေါ်တူဂီတွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်
ချန်ပီယံလိဂ် ကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တွေကို တကျော့တည်းစနစ်နဲ့ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ လစ္စဘွန်းမြို့ မှာ ကျင်းပသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ ဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် တာဝန်ရှိသူတွေဟာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ဆွေနွေးကြဖို့ရှိပြီး အဲဒီအဆိုပြုချက်ကို အတည်ပြုဖို့ရှိပါတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲဟာ ၁၆ သင်းအဆင့် ဒုတိယအကျော့ပွဲစဉ် ၄ ပွဲကျန်ရှိသေးတာပါ။ အဲဒီပွဲစဉ်တွေကို ပုံမှန်အတိုင်း ပြီးဆုံးအောင်ကစားပြီး ကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တွေကစလို့ လစ္စဘွန်းမြို့က ဘင်ဖီကာ အိမ်ကွင်းနဲ့ စပို့တင်းလစ္စဘွန်း အိမ်ကွင်းတွေမှာပဲ ကျင်းပဖို့ ရှိနေတာပါ။ သြဂုတ် ၁၂ ရက်ကနေ ၂၃ ရက်အထိ ၁၁ ရက်ကြာ ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲစဉ် ၄ ပွဲကို သြဂုတ် ၁၂ ရက်ကနေ ၁၅ ရက်အထိ တရက်တပွဲ ဆက်တိုက်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး ဆီမီးဖိုင်နယ် ၂ ပွဲကို သြဂုတ် ၁၈ နဲ့ ၁၉၊ ဗိုလ်လုပွဲစဉ်ကို သြဂုတ်၂၃ ရက် နေ့ ကျင်းပဖို့ လျာထားတာပါ။ အဲဒီ အဆိုပြုချက်အပေါ်မှာ UEFA ဘက်ကတော့ တစုံတရာ မှတ်ချက်မပေးသေးပါဘူး။ UEFA အနေနဲ့ ယူရိုပါလိဂ်ပြိုင်ပွဲကိုလည်း ကွင်းတကွင်းထဲမှာပဲ တကျော့တည်းစနစ်နဲ့ ကျင်းပဖို့ စီစဉ်မယ်လို့သိရပါတယ်။
ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲ ကွင်းပြောင်း ကျင်းပဖွယ်ရှိ
ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲစဉ်ကို တူရကီနိုင်ငံ အစ္စတန်ဘူလ်ကွင်းမှာ ကျင်းပဖို့ သတ်မှတ်ထားပေမယ့် ကွင်းပြောင်းကျင်းပရဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ဥရောပ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်တွေကို သြဂုတ်လအတွင်းမှာ စတင်ဖို့ လျာထားပြီး ပွဲစဉ်အားလုံးကို ဗိုလ်လုပွဲ ကျင်းပမယ့်ကွင်းမှာပဲ ကျင်းပဖို့ ကနဦး စီစဉ်ထားတာပါ။ တူရကီနိုင်ငံအနေနဲ့ ပွဲစဉ်အားလုံးကို လက်ခံကျင်းပနိုင်ဖို့ ကုန်ကျစရိတ် အခက်အခဲရှိနိုင်တာကြောင့် ကွင်းပြောင်းကျင်းပရဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ကွင်းရွှေ့ပြောင်း ကျင်းပမယ့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဇွန် ၁၇ ရက်နေ့မှာ UEFA က ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြောင်းလဲကျင်းပဖွယ်ရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ ပေါ်တူဂီနဲ့ ဂျာမနီနိုင်ငံက ကွင်းတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေများတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခုနှစ်ချန်ပီယံလိဂ်မှာ အက်သလက်တီကို၊ လိုက်ဇစ်၊ ပီအက်စ်ဂျီနဲ့ အက်တလန္တာအသင်းတွေက ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်ကို တက်ရောက်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
စကော့တလန် ပရီးမီးယားရှစ်ပြိုင်ပွဲကို ဖျက်သိမ်း၊ ဆဲလ်တစ်အသင်း ချန်ပီယံဖြစ်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပြန့်ပွားမှုကြောင့် စကော့တလန် ပရီးမီးယားရှစ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက် ဆဲလ်တစ်အသင်းဟာ အခုနှစ် ဘောလုံးရာသီအတွက် ချန်ပီယံဆုကို ရရှိသွားပါတယ်။ စကော့ပရီးမီးယားရှစ်အသင်းတွေရဲ့ ရပ်တည်မှုကို ပွဲတပွဲချင်းစီ အမှတ်ပေးကာ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် Hearts အသင်းဟာ တန်းဆင်းခဲ့ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရီးမီယားရှစ်ပြိုင်ပွဲကို ပြီးဆုံးအောင် ကစားဖို့အတွက် အဆင်မပြေဘူးလို့ အသင်း ၁၂ သင်းက သဘောတူခဲ့တာကြောင့် မေ ၁၈ ရက်က လုပ်ခဲ့တဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာ ၂၀၁၉-၂၀ ရာသီကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ဖို့ စကော့တလန်အသင်းတွေက ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ရာမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ တပွဲချင်းစီ အမှတ်ပေးတဲ့စနစ်ကြောင့် လက်ရှိ အမှတ်ပေးဇယားမှာ ပြောင်းလဲမှုတခုသာ ရှိခဲ့ရပြီး စိန့်ဂျွန်စတုန်းအအသင်းဟာ ဟီဘာနီယန်အသင်းကို ကျော်တက်ပြီး အဆင့် ၆ နေရာကို ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ ချန်ပီယံအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ ဆဲလ်တစ်အသင်းဟာ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေကို မရပ်နားခင်မှာ ဒုတိယနေရာက ရိန်းဂျားအသင်းထက် တပွဲပိုကစားထားပြီး ၁၃ မှတ် ပြတ်နေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆဲလ်တစ်အသင်းဟာ စကော့တလန်လိဂ်ချန်ပီယံဘွဲ့ကို ၉ နှစ်ဆက်တိုက် ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တန်းဆင်းခဲ့ရတဲ့ Hearts အသင်းကတော့ အမှတ်ပေးဇယားရဲ့ အောက်ခြေမှာ ဟာမီတန်အကယ်ဒမီကယ်အသင်းနဲ့ ၄ မှတ်အကွာကို ရောက်ရှိနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လိဂ်ဥက္ကဋ္ဌ အန်ဘာ့ဂျ်ကလိဂ်ကို ယာယီပြန်လည်ပြင်ဆင်ခွင့်အတွက် အဆိုပြုချက်တခုကို ဆောင်ရွက်ဖို့ သဘောတူခဲ့တာကြောင့် Hearts အသင်းဟာ တန်းဆင်းရမှုကနေ ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားမှုကို ရရှိဖို့ အခွင့်အရေး ရှိနေပါတယ်။ စကော့တလန် ဘောလုံးအားကစားရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေဟာ လိဂ်ကိုစောပြီး ပိတ်သိမ်းလိုက်ရင်တောင် ဥရောပပြိုင်ပွဲ ဝင်ရောက်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဝင်ခွင့်ဆုံးရှုံးမှု မရှိစေရဘူးဆိုတဲ့ UEFA ရဲ့ အာမခံချက်ကို ရရှိထားပြီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် စပိန်ဘောလုံးနည်းပြတဦး သေဆုံး
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် စပိန်လူမျိုး ဘောလုံနည်းပြတဦး ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီလို့ Goal သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ သေဆုံးသူဟာ ဖရန်ဆွာဂါစီယာဖြစ်ပြီး သူဟာ မာလာဂါအခြေစိုက် ပေါ်တာဒါအဲလ်တာ လူငယ်အသင်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကတည်းက မန်နေဂျာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဂါစီယာဟာ ဒေသတွင်း ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးရတဲ့ ၅ ဦးမြောက်နဲ့ အသက်အငယ်ဆုံးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ပြီးခဲ့တဲ့သီတင်းပတ်မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံခဲ့ရပြီး မာလာဂါဒေဆေးရုံကို တက်ရောက်ကုသခဲ့ရပါတယ်။ ဆေးရုံကို ရောက်ရှိချိန်မှာ ဂါစီယာဟာ သွေးကင်ဆာရောဂါတမျိုးကို ခံစားနေရကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး ဒီရောဂါကြောင့် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို ခုခံရာမှာ ပိုမိုအားနည်းခဲ့ကာ မတ် ၁၅ ရက်မှာ သေဆုံးသွားပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူအများစုဟာ အသက် ၇၀ ကျော်အရွယ်တွေ ဖြစ်တာကြောင့် ဂါစီယာဟာ အခုချိန်အထိ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့ အသက်အငယ်ဆုံး ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လည်း သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ သူ သေဆုံးမှုကို ပေါ်တာဒါအဲလ်တာအသင်းက အတည်ပြုပေးခဲ့ပြီး ဝမ်းနည်းကြောင်း သဝဏ်လွှာတခုကိုလည်း လူမှုကွန်ရက်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဆီဂန်ဒါမှာ ကစားနေတဲ့ မာလာဂါအသင်းကလည်း ဂါစီယာ သေဆုံးမှုအတွက် မိသားစုဝင်များ၊ မိတ်ဆွေများနဲ့အတူ ဝမ်းနည်းကြောင်း ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ စပိန်နိုင်ငံဟာ အီတလီနိုင်ငံပြီးနောက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပွားမှုအများဆုံး ဥရောပနိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူပေါင်း ၉၁၉၀ ဦးရှိကာ သေဆုံးသူ ၃၀၉ ဦးရှိပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ် ပြန့်ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် ဂျာမနီ၊ အီတလီနဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံတို့နည်းတူ စပိန်နိုင်ငံက ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေကိုလည်း ရပ်နားထားရပါတယ်။ ဥရောပဒေသတွင်း ဗိုင်းရပ်စ် ပြန့်ပွားမှုဟာ တဖြည်းဖြည်း အခြေအနေဆိုးရွားလာခဲ့ပြီး ၂၀၁၉-၂၀ ဘောလုံးရာသီကို ရပ်နားလိုက်မလား၊ ဆက်ကစားမလားဆိုတာကို မတ် ၁၇ ရက်မှာ UEFA တာဝန်ရှိသူတွေက တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးသွားဖို့ ရှိနေပါတယ်။
လာမည့်နွေအပြောင်းအရွှေ့ မာရတ်ဇ်ကို ပီအက်စ်ဂျီ ခေါ်ဖွယ်ရှိ
ပီအက်စ်ဂျီအသင်းဟာ မန်စီတီးအသင်းတိုက်စစ်မှူး ရီယတ်မာရတ်ဇ်ကို လာမယ့်နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့မှာ ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ သတင်းတွေက ဖော်ပြပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်မန်စီတီးအသင်းဟာ UEFA ရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ပြင်းထန်စွာချိုးဖောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်ကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့လမှာ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့် ၂ နှစ်ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အသင်းဘက်က ဒီပြစ်ဒဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့ အားကစားဆိုင်ရာ ခုံသမာဓိရုံးမှာ အယူခံတင်သွင်း ထားတာကြောင့် ဒီခုံရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို စောင့်ကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခုံရုံးဘက်က ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မယ်ဆိုတာ မသိရသေးပေမယ့် ဒီပြစ်ဒဏ်သတင်း ကြောင့် မန်စီးတီးအသင်းအနေနဲ့ အသင်းမှာရှိတဲ့ နည်းပြအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ ထိပ်တန်းကစားသမား ကောင်းတွေကို ဆုံးရှုံးရနိုင်ချေရှိနေပါတယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ခွင့်ဟာ ထိပ်တန်းကစားသမားတွေအတွက် အိပ်မက်တခု ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံရမယ်ဆိုရင် မန်စီတီးအသင်းအနေနဲ့ အသင်းမှာရှိတဲ့ ကစားသမားတွေကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ ခက်ခဲနိုင်တယ်လို့ သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ ပြင်သစ်လီဂူးထိပ်တန်းကလပ်အသင်းက ပီအက်စ်ဂျီက အသင်းရဲ့တိုက်စစ်အင်အားကိုဖြည့်တင်းဖို့ မာရတ်ဇ်ကိုစိတ်ဝင်စားလာတာလို့ သတင်းတွေမှာ ဖော်ပြပါတယ်။ အယ်လ်ဂျီးရီးယား လက်ရွေးစင်တိုက်စစ်မှူး မာရတ်ဇ်ဟာ ဒီရာသီအတွင်း မန်စီတီးအသင်း အတွက် အထူးခြေစွမ်းပြနေသူဖြစ်ပြီး အသင်းအတွက်ပြိုင်ပွဲစုံ ၃၇ ပွဲကစားထားကာ ၉ ဂိုးသွင်းပြီး ဂိုးဖန်တီးမှု ၁၄ ကြိမ်ပြုလုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် ကစားသမားနဲ့ မန်စီတီးအသင်းတို့ကြားစာချုပ်ဟာ ၂၀၂၃ ရာသီမှ ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်မက်လုံး အပါအဝင် မငြင်းဆန်နိုင်တဲ့ ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးဆိုရင် မန်စီတီးအသင်းဟာ တိုက်စစ်ကစားသမားအား ဆက်ထိန်းနိုင်ဖို့ ရုန်းကန်ရနိုင်တယ်လို့ မှတ်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းဟာ အသင်းကနေထွက်ခွာတော့မယ်လို့ သတင်းကြီးနေတဲ့ တိုက်စစ်မှူး ကိုင်လီယန် အမ်ဘတ်ပီရဲ့နေရာမှာ အစားထိုးဖို့ မာရတ်ဇ်ကို စိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပြီး ဘတ်ပီဟာ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့တော်တော်လေး သတင်းကြီးနေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။